In kabadan 60 Autolisp joogtada ah ee AutoCAD - Geofumadas
Nofeembar, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, topografia
Lisp si loo helo isbeddel iyo hawlgal
1. Ku beddel cagaha ilaa mitir iyo wixii ka dambeeya
Nidaamkani wuxuu abuuraa Autolisp, wuxuu noo ogolaanayaa inaan bedelno qiimaha soo gashay cagaha ilaa mitir iyo wixii ka dambeeya, natiijada waxaa lagu muujiyay khadadka taliska.
Halkan waxaan sidoo kale u isticmaali shaqada CVunit, carrab la'aan shaqo this, qiyamka diinta ka helay, acad.unt File (AutoCAD Qeexid Unit), haddii aad rabto in aad dhawrtaan si faahfaahsan waxa qiimayaashan iyo sicirro kala duwan, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad aragto file this .
Si aad u isticmaasho habdhaqankan, samee waxyaabaha soo socda:
Ku dheji faylka lisp ee AutoCAD.
Ku qor magaca amarka: PIM
Xulo nooca wax lagu beddelayo: cagaha ilaa mitir ama mitir cagaha
Gali qiimaha aad rabto inaad beddesho
Waxaad ka heli doontaa khadka taleefanka macluumaadka la socoshada unugga
Waxaad heli kartaa jadwalka Halkan
2. Dhawaaqa dhammaan qoraallada la soo xulay
Jadwalkani waxaa lagu soo saaraa AutoLisp si loo helo isku dhufashada dhammaan qiimaha qoraallada la doortay, si loo helo si sax ah u shaqeynta waa lagama maarmaan in qoraalada la doorto ay yihiin nooca TEXT oo aan ahayn nooca MTEXT.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay saddex qoraal kasta 3 la qiimeeyo: 1, 2, 3 oo loo doortay saddex, natiijada amarka waa dhufashada saddex lambar kuwaas oo, loo siman yahay: 6.
Ku qor magaca amarka: mul
Xulo dhammaan qoraallada aad rabto in lagu helo isku dhufushada.
Taabo furaha Ku qor si aad u hesho natiijada.
3. U diyaari inji ilaa mitir
Jadwalkan yar wuxuu noo ogolaanayaa inaan beddelno qiimaha lagu galo mitir ilaa mitir oo muujinaya natiijada xarriiqda taliska, sidoo kale waxay muujineysaa natiijada u dhaxeysa 2 oo qayb ka ah macluumaad dheeraad ah.
Waxaad bedeli kartaa amarkan si aad u bedesho noocyo kale oo unugyo ah, taasina waa inaad bedesho koodhka ilaha, tusaale ahaan, bedelka inches ilaa cm o daqiiqado illaa ilbiriqsi, kaliya beddel xuduudaha howlaha «Cvunit"In cvunit amarka this ayaa ku soo koobin soo socda:" inches "" mitir "xuduudaheedu waa kuwan, qiimaha galay waa la qaadi doonaa sidii inches (inches) oo loo roggi doontaa in mitir (mitir), waxaad bedeli kartaa xuduudaha by soo socda:" daqiiqo »« labaad »,« inch »« cm »,« acre »« sq yard »,« ft »« gudaha », iyo kuwo kale.
Ku qor magaca amarka: PM
Gali qiimaha aad rabto inaad ku beddesho illaa mitir ilaa mitir iyo
Diyaarso, waxaad heli doontaa macluumaadka is-beddelka unugga.
4. Ku dar dhererka laynka lakabka la xushay
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto masaafooyinka dhammaan khadadka ku jira lakabka walxaha aad doorato.
Jadwalkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto masaafooyinka dhamaan khadadka oo ku jira lakabka walxaha aad doorato, haddii polylines laga helo lakabka la xushay, waa la iska indhatiri doonaa.
Marka wadarta dhammaan laynka la helo waxaa natiijada la soo bandhigayaa natiijada.
Ku qor magaca amarka: sumlcapa
Xulo xariiqda ku jirta lakabka dariiqyada aad rabto inaad ku darto
Waxaad heli kartaa jadwalka ee USD 5.99 halkan
5. Ku dar qiimaha ama qiimeeynta qiimaha qoraalada la soo xulay
Jadwalkan oo lagu sameeyey AutoLisp wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku darno ama ka jarno qiimaha qoraalada la doorto.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay qoraal ah oo la qiimo ah 5 iyo isticmaali amarka this oo waxay galeen 2 qiimaha, isbedelka qoraalka la doortay, updated by 7 qiimaha, haddii qiimaha -2 la galay, qoraalka la cusbooneysiin doonaa 3.
Samee waxyaabaha soo socda si aad u isticmaashid habdhaqankan.
Ku qor magaca amarka: jr
Waxay muujisaa qiimaha lagu daro ama laga jaro
Dooro qoraallada lagu daro ama laga jaro.
6. Helitaanka aagagga ka soo jeeda qaybo kala duwan
Jadwalkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad heshid meelaha qaybta isgaadhsiinta iyo samaynta qiimaha laga helay sifooyinka gaarka ah.
Goobaha la doortay waa in ay ku jiraan lakab oo sharaxaya nooca aagga si loo helo, iyadoo lid ku ah lisp oo akhrin doona laba magac oo lakab ah, kuwan soo socda: «ShadingCut»Iyo«ShadowFill«.
Lootp wuxuu ku darayaa dhamaan meelaha hooska ee ku jira lakabka «ShadingCut»Dhammaan goobaha shoogga ee lakabka«ShadowFill"Oo mar doorashada loo baabiiyo sii wado si aad u cusboonaysiiso sifooyinkii meelaha block, waxaa loogu talagalay in waa inaad marka hore dooro sifo ee garabka horusocod ah, tani waa sifo aan muuqan, laakiin carrab la'aan ah wax yar ka hor ka xulashada ayaa muujinaya kadibna mar kale qarin, tan waxaa lagu sameeyaa amarka "Attdisp«, Ka dibna sifooyinka meelaha la gooyey iyo buuxinta ayaa la dooran doonaa kuwan waa la cusbooneysiin doonaa marka la eego qiimayaasha meelaha laga helay.
Xulashada walxaha waxaa lagu sameeyaa daaqad ay ku jiraan dhammaan punctures oo ay ku jiraan qoraalka horumarka qaybta.
Si aad u isticmaasho habdhaqankan waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku qor magaca amarka: AXA.
Xulo adigoo isticmaalaya daaqad oo dhan dhejinta jarista iyo buuxinta qaybta, oo ay ku jiraan qoraalka mid ka mid ah horumarinta mid isku mid ah.
Mid ka mid ah mid ayaa u xushay mid ka mid ah sifooyinka boodhka si loo baddalo, oo laga bilaabo dabeecada horumarka.
Amarku wuxuu ku dhamaan doonaa si toos ah kaddib marka la gooyo oo la buuxiyo sifooyinka.
Xaashida CAD-du waxay kuxirantahay lakab si loo fahmo amarka.
7. Helitaanka xawaaraha qadka ama polyline
Amarkan (Aut routet) wuxuu helayaa qiimaha jajab ee xariiq ama kabridda, sidoo kale wuxuu helayaa dhererka xariiqa, dhererka dhererka iyo xagasha.
Waxay soo bandhigeysaa caawinaad weyn marka aan rabno xakamaynta hilqadaheena, si aad u hesho boodhka, waa ku filan inaad dooratid line ama polyline, natiijada waxaa lagu soo bandhigi karaa shaashadda (command line) ama adoo dooranaya qoraalka (qiimaha qoraalkaan ayaa isbeddelaya qiimaha jamac laga helay).
Waxaa mudan in la xoojiyo in marka la eego qaabka loo yaqaan "polyvin", amarkani wuxuu helayaa xargaha qaybta kowaad.
Ku qor magaca amarka: pnd
Xulo line ama polyline si aad u hesho jiirada.
Haddii loo baahdo, waxaad dooran kartaa qoraalka si aad u bedesho qiimaha ay u leedahay jugada laga helay, haddii kale, saxaafad kaliya Ku qor si aad u hesho natiijooyinka shaashadda.
8. KA HELI KARTAA MUUQAAL WANAAGSAN OO KU SAABSAN SIDA LOO ISTICMAALIYO LAYLI AMA POLILINES
Waa qaab caadi ah oo lagu soo saaro Lisp kaas oo hela wadarta dhererka qadadka khadadka ama sanduuqyada la doorto, natiijada wadartaas waxaa lagu dhigi karaa qoraalka xulashada ama waxaa lagu muujin karaa oo keliya qadka amarrada.
Waxaad dooran kartaa khadadka iyo polylines dhammaantood adigoo u maraya hal daaqad ama hal mid.
Tirada jajab tobanlaha ah ee wadarta dhererka la helay waa 2, laakiin qiime kale ayaa la geli karaa.
Ku qor magaca amarka: lpl
Ku qor tirada jajab tobanlaha natiijada dhererka dhererka
Xulo xariiqyada ama polylines si ay u daraan dhererkooda
Taabo furaha Ku qor si loo dhammeeyo xulashada
Xulo qoraalka si aad u bedesho qiimaha ayadoo la mid ah miisaankii la helay ama la riixay Ku qor mar labaad si ay u muujiyaan natiijada khadka taliska
9. KA HELI KARTAA MACLUUMAADKA MUWAADINIINTA LAGU DHACAY
Tani waa jadwalka yaryar oo soo saara liis ay ku qoran yihiin magacyada dhammaan lakabyada sawir-qaadaha hadda iyo bandhigaya xariiqda taliska.
Ku qor magaca amarka: lc
Natiijadu waxay noqon doontaa liis ku yaal khadadka taliska ee dhamaan lakabyada sawirka.
La shaqeynta isuduwaha
10. JOOJINTA AUTOLISP EE KU SAABSAN MIISAANKA XOGTA
Jadwalkani wuxuu abuuraa miis ay ku qoran yihiin tirada safafka iyo tiirarka, waxay la mid tahay amarka miiska AutoCAD, laakiin waxay u fududahay in la isticmaalo.
Nidaamkani wuxuu abuuraa jadwal leh tirada safafka iyo tiirarka la cayimay, waxay la mid tahay miiska miiska AutoCAD, laakiin waxay u fududahay in la isticmaalo, inkasta oo aysan ku xirnayn xogta leh Excel waxaad haysataa ikhtiyaarka aad ku buuxin kartid miisaanka qiimaha horay loo soo sheegay taas oo default default waa «0.00» iyo waxaa la dhigayaa in kasta oo cell ah in la edbiyo dambe.
Amarkan sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad miiska soo saarto adoo isticmaalaya laba doorasho, ikhtiyaarka koowaad wuxuu ogolaanayaa miiska iyada oo loo marayo dherer joogto ah iyo ballaadhan unugyada iyo doorashada kale dejiya qiimayaasha si aad u ogaato tirada safafka iyo tiirarka geli tilmaamida daaqad.
Fursadaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Qoraalka caadiga ah: Amarka waxaa lagu baran karaa in lagu daro qiimaha caadiga ah ("0.00") ee unug kasta oo soo saarey, qiimahaas waa la qaabeyn karaa waana isbeddel karaa mid kasta oo kale.
Heerka qoraalka: Waa sarajoogga qoraalka galka ah uu yeelan doono, dhererka caadiga ah wuxuu leeyahay qiimaha «0.25».
Sababta: ee qoraalka la geliyay, sidaa daraadeed waxaa jira laba ikhtiyaar: Fit (Fit in cell) iyo Dhexe (kala badh qolka).
Color: Midabkani waa midabka qoraalka la geliyay, ayada oo ah midabka hore ee midabka hore waa midabka hadda la qeexay.
Ku qor magaca amarka: Shaxda
Marka la eego Nooca Generation waxaa la soo xushay, hal dhibic ayaa lagu muujiyay ama laba dhibcood ayaa lagu muujiyey inay soo saaraan daaqad
Habp hababka isdhexgalka ee Excel
11. Iskuduwaha Dhoofinta ayaa tilmaamaya faylka CSV
Jadwalkan oo la soo saaray Autolisp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhoofiso qodobbada isku-duwidda faylka Microsoft Excel CSV. Walxaha aad ka dhoofi kartid iskudhafyadaasi waa dhibco, qoraalo iyo jaantusyo, iyaga oo doorta oo kaliya ku tilmaam faylka loogu talagalay iskuduwaha.
Waa mid gaar ah Daryeelka haddii shaygu uu yahay qoraallo, tan iyo markii la geliyay giraanta oo lagu xisaabtamayo waqtiga dhoofinta iskudhafka, waxay kuxirantahay xaqiiqda ah in qoraalladani leeyihiin, haddii aad hubto in caddaynta qoraallada ay sax tahay wax dhibaato ah maaha in dhoofinta dhibcooyinka.
Waxaa lagugula talinayaa inaad xulato walxaha oo leh hal dhibic oo keliya, sida blocks ama points of AutoCAD, habkaasi waa ammaan in iskudhafyada la dhoofiyo ay yihiin kuwo isku xiran.
Sida aan hore u soo sheegnay, wadashaqayntan joogtada ahi waxay ka tarjumeysaa dhibcooyinka, qoraallada (ama sidoo kale Mtext) iyo blocks, laakiin waxaad buuxin kartaa nuqulka koodhka si aad u tixgeliso hay'ado kale sida tusaale ahaan: wareegyada, khadadka hore ee khadadka, walxaha kale in xogta ay ku leedahay xogta 10.
Xarumaha dhoofinta ayaa leh qaabka P, N, E, C (Point, North = Y, East = X, Cota = Z) iyo sida loo soo dhoofiyo faylka CSV (oo loo kala sooco faajinta), marka feylka la furo qiimaha kasta wuxuu ku jiraa unugeeda kala duwan.
Si aad u isticmaasho jadwalkaaga waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku qor magaca amarka: EPC
Xulo walxaha laga yaabo in iskudhafka la dhoofiyo (xusuuso inaad xulan doonto dhibcooyinka, qoraalada iyo blocks (haddii aad ka hesho).
Waxay tilmaamaysaa goobta iyo magaca faylka CSV ee iskuduwaha la dhoofiyo la soo saari doono.
12. WAXYAABAHA SI JOOJINTA WAXYAABAHA KORONTADA WAXQABADKA LAGA HELAY LAHAYDA QIIFKA QORSHAHA
Qorshahan Autolisp ee caadiga ah ee loogu talagalay AutoCAD wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhoofiso dhibcaha iskudhafka ee dariiqyada la xushay si loo fayl galka Microsoft Excel CSV
Isku-duuduubyada loo dhoofiyo ayaa u dhigma bilaabista iyo soo afjarida khadadka, sidaa daraadeed haddii khadadka ay ku soo biiraan isla hal dhibcood, lisp wuxuu akhrin doonaa saacadaha 2 isku-duwahaas.
Xaaladdan, haddii loo baahdo waa inaad tixgelisaa ikhtiyaarka aad ku xallisid iskudhacyada nuqul, iskudhafka la dhoofiyo ayaa leh qaabka P, N, E, C (Point, North = Y, East = X, Dimension = Z) iyo sida loo dhoofiyo a Faylka CSV (oo ay kala soocaan malawadka), marka la furo feyl kasta qiimaha kasta wuxuu ku xiran yahay unugeeda madaxbannaan iyo si haboon.
Ku qor magaca amarka: EL3
Waxay doortaan xarriijimaha ka soo baxa iskudhafka ah ee bilowga iyo dhammaadka dhibcaha la dhoofin doono.
Muujisaa meesha iyo magaca faylka CSV halka iskudhafka la dhoofinayo la soo saarayo.
13. WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY QIIMEYNTA WAXYAABAHA KORONTADA KA MID AH MICROSOFT EXCEL
caadiga ah Tani ahaan loogu isticmaalo AutoCAD iyo codsiyada ay taagan ogolaadaa inaad kala Cudarada ku wadataa of dhibcood file ah ee Microsoft Excel, joogtada ah tani ma aha lagama maarmaan in la sheeg faahfaahinta la xidhiidha faylka si dajiyaan, sida iyada oo interface leeyihiin fursadaha la heli karo loo baahan yahay in lagu soo dhejiyo dhibcaha sida aad rabto.
Si aad u soo dhisto qodobbada, waxaa loo tixgeliyaa lagama maarmaan in feylka feylka la soo dhoofiyo leeyahay XLS kordhinta (laga bilaabo qoraalada ka hor xafiiska 2007) ama XLSX (version 2007 ama ka dib) iyo faylka iskudhafyada waxaa lagu qaabeeyey qaabka: P, N, E, C, D, (Pwada jir, Ndhexe, Eistaago Cota Dsharaxaad), sida lagu muujiyay sawirka soo socda:
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dooratid 3 noocyada kala duwan ee siyaabaha ah si aad u gelisid walxaha dhibcaha ee isku xirka akhrinta.
Midka koowaad waa in la doorto in la geliyo a Nidaamka AutoCAD Point (taas oo ay soo saarto amarka POINT), xusuusnow in bandhigga dhibicda ee AutoCAD ay ku xiran tahay nooca bandhigga dhibcaha ee aad ku qeexday amarka DDPTYPE.
Doorashada labaad waxay ka kooban tahay dooro xayirad lagu keydiyo sawirka dhibic geliyo akhrin ka duwo, joogtada default abuuraa block cusub oo lagu magacaabo "cg dhibcood" kaas oo loo isticmaali karaa haddii la doonayo ama ma jiraan blocks in sawirka.
Doorashada saddexaad ee la xidhiidha habka dhibicda, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo dejisid block ka soo dukaanka adag, xasuusnoow in xaaladdan oo ah cabbirka uu yahay boodhka la abuuray saamaynta muuqaalka baqshad xilliga gelinta.
Marka la eego xogta dhibicda (iwm), iCe kuu ogolaanayaa inaad go'aansato waxa aad rabto inaad muujiso, haddii aad rabto inaad muujiso Point-ka, kaliya waxaad yeelan doontaa xulashada ikhtiyaarkan, isku mid ah qoraalka cabbirka ama sharaxaadda dhibicda. Waxaad dooran kartaa inaad soo bandhigto xogta 3 ama ma muujineyso wax.
Intaa waxaa dheer waxaad xakameyn kartaa tirada jajabka tobanlaha ee qoraalka cabbirka ee la geliyayiskeelka lagu tilmaamay doonaa, wareeg oo dhanba, kuwaas oo salka dhibic waa meesha uu barta laga keeno iyo kala qoraalka si ixtiraam leh u barta, xulashadan la lagu kaydin karaa la magac, si aad u soo wici kartaa si waafaqsan dhibcaha aad soo dejin doonto.
Dhamaan xulashooyinkaani waxay kuu oggolaanayaan in aad si dhaqso leh uga soo dhoofiso faylkaaga Excel faylka si dhakhso ah iyo muuqaal muuqata, waxaa habboon in la caddeeyo habka qoraallada calaamadda dhibcaha loo arko aysan ku xirnayn jadwalka, laakiin qaabka qoraalka hadda ee sawirkaaga iyo lakabka hadda.
Qaar ka mid ah waqti ka hor waxaan la daabacay joogtada ah ee ay user a, laakiin ogol yahay dejinta isu duwaha ka soo file qoraal ah laakiin la xadad badan, wakhtigan la isticmaalayo this amarka cusub yeelan doonaan fursado dheeraad ah si loo xakameeyo soo wadataa hal dhibic galinta.
Faylka ku lifaaqan sidoo kale wuxuu bixiyaa tusaale xannibaad ah oo aad soo dejin karto, marka laga reebo xaashiyaha oo leh qaabka saxda ah ee amarku u baahan yahay inuu soo dejiyo iskudhafyada iyada oo aan wax dhibaato ah lahayn.
Ku qor magaca amarka: ICE
SANDUUQADDA ARDAYGA waxaad ku qeexdaa fursadaha aad u maleyneyso inay ku habboon tahay soo dejinta dhibcooyinka.
14. Soo-galaha meelaha laga soo galo faylka csv si looga gudbo qaybaha
Amarkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso aagagga (cut off default and fill) si ay u kala gooyaan qaybaha dhulalka, meelaha laga soo dejiyo waa inay ku jiraan faylka CSV (comma-delimited), sida ku cad feylka ku lifaaqan.
Amarkani wuxuu akhrinayaa horumarka ku yaala qaybta ugu horeysa ee faylka csv iyo raadinta qoraalka oo leh isla horukac ah faylka sawir-qaadista, geli cutubka iyo qaybta loo yaqaan "cut cut" iyo "fill buuxa" ee dhinaca midig ee qaybta iskutallaabta.
Dabagalayaal geliyo cut iyo buuxi meelaha by default waa: "AC =" iyo "AR =" ay qaban karaan code, iyo sidoo kale tirada tobanle iyo height of qoraalka geliyo.
Waxay u dhigeysaa sida lakabka hadda ee ku jira qoraallada la gelinayo, tusaale ahaan: «Text-Areas».
Ku qor magaca amarka: arimx
Xulo faylka SCV oo ay ku jiraan meelaha laga keeno
Xulo waxaad rabtaa inaad gashid mawduucda ka soo baxda faylka csv, haddii aad rabto inaad doorato dhammaan dadka oo kaliya riix furaha Gali.
15. Qoraan waddooyinka sawirada lagu geliyay sawirka
Haddii aad la shaqeysid sawirro, waxay badanaa lagama maarmaan noqotaa inay soo saaraan liis ay ku jiraan, oo ay ku jiraan wadadooda goobta, habkan oo kale waxaad samayn kartaa liis ay ku qoran yihiin wadooyinka dhammaan sawirada la geliyey sawirka hadda.
Jadwalkani uma baahna talada wax kasto, si fudud u wac taliska oo isla markiiba waxaa lagu soo bandhigi doonaa lineka AutoCAD command, liiska oo leh waddooyinka sawirada la geliyey.
Ku qor magaca amarka: lima
16. Ku dhaji qoraalka wadada faylka hadda jira
Jadwalkaan waxaa lagu soo saarey Autolisp, wuxuu noo ogolaanayaa inaan cusboonaysiino qoraal kasta, oo leh jidka iyo magaca faylka hadda.
Tani waa caawimaad fiican marka la cusbooneysiinayo warqada hore ee qorshaha macluumaadkaan.
Wadada la helay waxaa ka mid ah magaca tabta hadda, haddii ay ku jirto goobta qaabka, waxay muujin doontaa dhamaadka waddada: moodeelka, haddii kale waxay muujineysaa magaca 'tab tab'.
Ku qor magaca amarka: jidka
Xulo qoraalka si aad u bedesho qiimaha wadada jadwalka hadda, haddii aadan rabin inaad beddesho qoraalka qaar saxaafadda Ku qor si ay u muujiyaan waddada xadhigga taliska.
17. Wuxuu bedelayaa qoraalka taariikhda la joogo oo leh qaabab kala duwan oo wax soo saar
Iyada oo gacan ka heleysa habdhaqan wanaagsan waxaan ku beddeli karnaa qoraal kasta, qiimaha taariikhda hadda jirta.
8 ayaa bixiya noocyo kala duwan oo nooc ah taariikhdaas, oo ka bilaabma nooca taariikhda fudud, illaa nooca taariikhda dheer ee taariikhda, halkaasoo magaca maalinta taariikhda si toos ah loola dhaqmo AutoLisp.
Waxaad dooran kartaa noocyada noocyada Text y MtextKuwaas waxaa si toos ah bedeli doona taariikhda hadda qaab ee la doortay, taariikhda qaabab la heli karo waa kuwa ka muuqda sawir ah, mid kasta oo loo aqoonsaday by ay tirada, taas oo u adeegi doontaa inaad doorato qaabka marka codsaday on line amarka of AutoCAD.
Ku qor magaca amarka: RF
Ku calaamadee lambarka 1 ee 8, qaabka soo saarista taariikhda, waxaad geli kartaa calaamadda su'aasha (?), si aad u muujiso qaababka taariikhda la heli karo
Dooro qoraallada aad rabto inaad beddesho taariikhda foomka la soo xulay
Taabo furaha Ku qor si loo dhammeeyo amarka oo loo cusbooneysiiyo qoraallada la soo xulay
18. WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY CODSADAHA AMA ISKU DARAYNTA WAX-KA-QAADANAYO
Mararka qaarkood waxaan rabnaa in aan maal qiimaha laba qoraalka, tusaale ahaan, in qoraalka tirada 1346 1111 noqdo iyo qeybsanaan ku xigeenka, joogtada this noo ogolaadaa in beddelo qiyamka qoraalka la doortay.
Si loo gaaro natiijadan, waxay ku filan tahay inay muujiso labada qoraalo, midba kan kale ka dib.
Ku qor magaca amarka: tra
Dooro labada qora in la baddalo.
19. KALA DUWAN TAHAY MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA MACLUUMAATIGA AH EE LAGA HELAY CODSIGA WAQTIGA AH
Amarkan cusub wuxuu helayaa qiimaha cabbirka (Y coordinate) ee barta la siiyey oo wuxuu u dhigaa mawduuca qoraalka la soo xulay.
caadiga ah waa mid aad u faa'iido badan, tusaale ahaan marka la profiles dhul ka shaqeeya oo aad rabtid inaad hesho height of vertex ah oo qarka u saaran in mid ka mid ah qoraalka oo muujinaya ku tiil dalkii, waxa kale oo aad la isticmaali karaa marka la qaybaha kala duwan ee dalka iyo shaqada aad rabto in aad si aad u hesho qiimaha aragti ee dhidibka of qaybta iyo dhigay qoraal ah oo muujinaysa qiimaha aragti in.
Qodobkan waxaad qeexi kartaa miisaanku wuxuu yeelan doonaa cabbirka si uu u qeexo qoraalka, ma aha dhererka qoraalka la soo xulay, laakiin miisaanka uu leeyahay profiska ama qaybta si uu u muujiyo, haddii profile-kaaga tusaale ahaan saacado 10 dhinaca qumman, waa inaad qortaa 10 NC amarka si aad u barbar dhigto sida, amarka, samee qaybta u dhiganta oo qiimaha ku haboon qoraalka la soo xulay.
Ku qor magaca amarka: NC
Waxay muujineysaa miisaanka kootada
Geli tirada tirada jajab tobanlaha qoraalka uu ku yeelan doono cabbirka loo yaqaan (3 default default)
Waxay tilmaamaysaa dhibicda aad rabto inaad hesho
Xulo qoraalka lagu beddeli doono qiimaha kootada la helay ama haddii aad rabto inaad riixdo fure Ku qor si ay u muujiso oo keliya kootada la helay iyadoo aan la beddelin qoraal
20. DIIWAAN KALA GO'AN OO KU SAABSAN TAHAY WAXYAABAHA LAGA HELI KARO WAXA LAGA HELI KARO
Amarkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho qiyamka horukaca (dimuqraadiyada) iyo qiimaha (X iyo Y qiimaha) ee barta la siiyey oo aad ku qorto qoraalka 2 ee la xushay.
Qoraal kasta ka sokow waxay ku dareysaa horgale ama horgale, tusaale ahaan haddii horgale loo muujiyey cabirka (isku-duwaha Y) ee u dhigma «CT =»Marka qoraalka aragti la soo xulay, amarka casriyeyn doono qoraalka la doortay by qiimaha xidhxidhan ka helay, laakiin horgalaha tilmaamay, tusaale ahaan, "CT = 236.42" marka qoraalka ah ee horumar la xushay, waxa lagu updated doonaa qiimaha X ee isku-duuban ee la helay oo lagu daray santuukha «0 +», tusaale ahaan «0 + 10.0».
Amarkani wuxuu ka kooban yahay horgalayaasha horukaca horey loo qoondeeyey iyo tan hore loo qeexay ("0 +" iyo "CT =") oo kaliya ayaa lagu beddeli karaa iyada oo wax ka beddelaya koodhka ilaha, marka lagu daro amarkan waa la bedeli karaa haddii loo baahdo, si marka hore iyo sireed lagu daro isla waqtigaas qoraalka.
Ku qor magaca amarka: PC
Waxay tilmaamaysaa qodobada qiimaha kor uqaadida (X isku-duwaha) iyo isku-duwaha (isku-duwaha Y)
Dooro qoraalka horumarka ah
Dooro qoraalka cabbirka
Qoraallada qoraalka ayaa la cusbooneysiin doonaa xogta la helay
21. WAX KA BEDDELISTA MAS'UULKA KA QAYB QAADASHADA BARNAAMIJKA GAARKA AH EE LAGA QAADAY
Tani waa hab caadi ah oo loo sameeyo Autolisp taas oo noo ogolaaneysa inaan qiimeyno qiimaha (Y isku duwidda) at barta la siiyay.
Tani waxay codsi amarka xogta (dhibcood iyo qiyamka) iyo fuliya howlgallada si aad u hesho qiimaha ugu dambeeya ee la dejin doonaa si Y ee duwo of dhibic ku qeexan (beddesho qiimaha ku duwo of UCS ah (Iskudubaridka Universal) at hal dhibic ka muuqata qiimaha galay ).
Ku dhaji faylka AutoCAD adoo isticmaalaya amarka APPLOAD ama nuqul faylka ah iyo ku dhajinta AutoCAD.
Ku qor magaca amarka: OS
Marka la keeno tilmaamidda dhibicda, waa inaad tilmaantaa dhibicda shaashadda (meesha aad rabto inaad sameyso cabbir gaar ah).
Amarka wuxuu kuu sheegi doonaa inaad gasho qiimaha cabbirka si aad u dejiso ama u doorato qoraalka:
Halkan waa inaad gashaa qiimaha cabbiraadda aad rabto in aad u hesho iskudubaridka Y ee meesha la tilmaamay, waxaad geli kartaa qiimo ama waxaad dooran kartaa qoraalka ku jira qiimaha cabbirka, amarku wuxuu heli doonaa oo keliya qiimaha tirade ah haddii sidoo kale waxay leeyihiin sharraxaad.
Si loo xaqiijiyo in cabbirka la soo gaabiyey lagu dhigay bartilmaameedka tilmaamaya aqoonsiga amarka, sheeg tilmaamaha, oo fiiri xarriiqda taliska ah in qiimaha Y ee isku-duuban uu hadda yahay qiimaha la galay.
22. AREASX: GO'AANKA LOOGU TALAGALAY CIQAALAHA BULSHADA
Amarkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho goobo muujinaya qodob gudaha ah oo u dhaxeeya walxaha ama adigoo dooranaya faallooyin xiran, amarkani wuxuu muujinayaa aagga la helay ama haddii kale lagu qoro qoraalka la soo xulay.
Taliska Axadeed wuxuu leeyahay fursadaha soo socda:
Sheeg barta gudaha ee aagga ama [Xulo shayga / Fursadaha] :
Halkan waa inaad ku tilmaantaa qodobbada gudaha ee laga helayo goobtaas, fursadaha kale ayaa lagu sharaxay hoos:
Xulo shay: Halkii ay ku tusin lahaayeen qodobbada gudaha si ay u helaan hawo, iyada oo loo marayo ikhtiyaarkan waxaad dooran kartaa geesoole xiran si aad u heshid aaggeeda.
Fursadaha la heli karo: Doorashadani waxay kuugu kordhinaysaa sanduuqa khadadka Doorka, habka wada sheekeysiga waa sida soo socota:
Doorasho kasta ayaa lagu sharaxay hoos:
Tirada jajab tobanlaha: Tirada jajab tobanlaha ah waxay lahaan doontaa (2 default default).
Dhererka qoraalka ah ee la geliyo: Haddii aad go'aansato inaad gashid qoraalka aagga la helay, halkan waxaa la dejiyaa dhererka qoraalka ah.
Kala beddelashada meelaha: Doorashadan waxa kuu ogolaanayaa hawlgallada meelaha qiimaha helay, meel kasta ku dari doonaa, gooyaan, tarmin ama u qaybi arrin ay tahay in la cayimay hoose ee doorashadan.
Amarku wuxuu muujinayaa haddii beddelka uu shaqeynayo iyo midka hawlgallada la fulinayo iyo qiimaha ay baddelaadda lagu fulin doono.
Doorashadani waxay kuu ogolaaneysaa in aad u habeysid meelaha marka sawiradu ay ku jirto miisaan kala duwan ama cutubyada sawirrada kale.
Codso shooga: Doorashadan waxay u ogolaanaysaa meel kasta oo la tilmaamay inay hoos u dhacayso si ay u aragto aragti fiican ee aagga la helo, taas oo u oggolaanaysa inay hubiso haddii ay sax tahay (On default).
Magaca Shaleemada: Halkan waa inaad ku qortaa magaca shaabadda si loo isticmaalo meelaha la tilmaamey (Qalab adag).
(Shading) Miisaanka: Halkan waxaa ku jira qodobbada isbedbedelka shoogga, sheygani waa isbeddel sida waafaqsan nooca shoogga lagu soo xulay.
Midab (shaati): Midabada laga yaabo in shimbanku ku dhaco meelaha la tilmaamay.
Dhammaystirka shoogga: Doorashooyinka hoose ee hoos ku xusan marka codsiga amarka la joojiyo.
Qaab dulucaad: Haddii ay suurtogal tahay in lagu dhajiyo goobaha la soo saaro lama tirtirin.
Qabo shaati: Haddii ay suurtogal tahay in sheyga la abuuray aan la tirtirin.
Codsiyada Ugu Dambeysa:
Sheeg barta gudaha ee aagga ama [Xulo shay / Geli aagga qoraalka / Fursadaha] :
Geli goobta qoraalka: Doorashadani waxay kuu ogolaaneysaa inaad geliso qoraalka meesha la helay halkii laga dooran lahaa mid ka mid ah inuu beddelo. Qoraalka meesha la helay ayaa horay loo soo dhajiyay: »Area =», horgalkan waxaa lagu badali karaa lambarka barnaamijka.
Beddel qoraalka: Doorashadan waxa waa ka shaqeysiin markii fure u gala la isku soo riixayo ama badhanka mouse xaq la isku soo riixayo, taas oo ka codsan doonaa in qoraalka ah, tusaale ahaan haddii aad leedahay qoraal ah la content soo socda la doorto: "AC = 0.00m2" oo isticmaalaya amarka ayaa laga helay meel ka mid ah 3.25, markaas amarka bedeli doona warsiinta text by the "AC = 3.25m2." Sida aad arki karto, faas, bedeli karo oo kaliya qiimaha tiro ka mid ah qoraalka si uu u bedelo, sidaas darteed waxaad heli kartaa qoraalka hawada leh horgalayaal kala duwan, tusaale ahaan, "AR = 0.00m2", "AM = 0.00m2", "Aagga Goo = 0.00m2 »,« My area = 0.00m2 », iwm.
Mabaadiida asaasiga ah iyo kuwo aan sax ahayn
Aqoonsi sharci ah
Ku qor magaca amarka: AX
Muuji barta gudaha ah ee aad rabto inaad hesho (waa inaad hubisaa in aagga la helo waa in si buuxda loo xiro, haddii kale amarku wuxuu muujinayaa fariin qalad ah).
Muuji qodobbada gudaha ah inta jeer ee aad u baahatid, amarku wuxuu ku farxi doonaa, isku uruurayaa (soo-ururin) dhammaan hawada la helay.
Ku dhufo gal ama mid-guji si aad u joojiso amarka una dhigto aagga qoraalka hadda jira.
23. Xulo dhamaan qeybaha lakabka walxaha la soo xulay
Jadwalkani yaraa wuxuu la mid yahay kii hore, farqiga ayaa ah in magaca lakabka aan halkan loo soo galin si loo doorto walxaha, laakiin cidda la doorto taas oo aad rabto inaad hesho magaca lakabka.
Sida jadwalka hore, xulashada shirkadaha ma muuqdaan, laakiin waxay u taagan yihiin sida kooxo loo doortay, sidaas awgeed habka xulashada waa in lagu tilmaamaa "Previous»Si aad u xulato walxaha.
Ku qor magaca amarka: ssl
Xulo shayga aad rabto inaad hesho magaca lakabka si aad u xulato hay'adaha kale
Samee xulashada hay'adaha waxtarka leh habka saadaalinta
24. Ka saar alaabta gudaha ama dibadda laga soo shubo polyvin ee la soo xulay
Isticmaalidda nidaamkan waxaad ka tirtiri kartaa walxaha ku jira gudaha gudaha ama dibadda ee sheyga la soo xulay, hadii ikhtiyaarka la tilmaamayo, walxaha lagu jajabiyay polyvin ayaa la gooyaa dhinaca la tilmaamay.
Marka ay timaado in laga saaro shay ka baxsan polyvin, daryeelka gaarka ah waa in loo qaato sida taladani waxay tirtiraysaa dhammaan walxaha ka baxsan polyvin.
Qodobbada si aad u doorato waa inay noqdaan baqshad xiran, haddii kale jadwalka ayaa ku soo biiraya qaybta ugu dambeysa ee qaybta hore, oo xidhaya sidaas oo kale iyada oo loola jeedo khadad khayaali ah polyvin iyo ka saarista wax kasta oo gudaha ama dibadda ka baxsan.
Doorashadan la gooyey maadaama ay tahay mid macquul ah, wuxuu kaliya ka shaqeeyaa walxaha gacanta laga jari karo, Tusaale ahaan, xariiqyo, goobooyin, arcs, iwm, baloogyo iyo walxo kale oo isku dhafan kuma haboona gudaha walxahaan la jari karo.
Iyadoo lakab feylka tijaabada ah ayaa ku lifaaqan sidaa darteed baaritaanada u dhiganta ayaa la sameeyaa ka hor inta aan la isticmaalin amarka faylasha kama dambaysta ah.
Ku qor magaca amarka: PolErase
Xulo polyvin taas oo u adeegi doonta sidii loo yareeyo alaabta si loo tirtiro.
Dooro mid tirtiraan sheyga xulashada, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka: Daaqada (waxay kaliya ka tirtiraysaa walxaha ka baxsan dibadda ama gudaha daaqadaas), Qabashada (waxay ka saartaa walxaha xitaa la jeexjeexay geeska polyvin), tirtiraan iyo dalagga (sida magacu tilmaamayo, waxay tirtiri doontaa shayada gudaha ama dibedda ah ee alaabta la duubo oo xoqaya walxaha xuddun u ah.
Waxay muujinaysaa a tilmaan dhinaca dhinac (gudaha / dibedda) ayaa tirtiri doona ama xayiraya walxaha.
25. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad xulato dhammaan qaybaha lakala soo galay
Waa wakhti caadi ah oo kuu ogolaanaya inaad xulato dhammaan qeybaha ku yaala lakabka la tilmaamay, ma kala soocaan midab ama hanti kale oo laga yaabo inay lahaadaan.
Nidaamkani ma aha mid xasaasi ah marka la gelayo magaca lakabka, si aad u soo geli karto si kasta, waa in si fiican loo qoro.
Ku qor magaca amarka: sca
Ku qor magaca lakab ee walxaha aad rabto inaad doorato
Samee xulashada hay'adaha wax ku oolka ah previuos
26. Nuqul ka dhig faahfaahinta qoraalka si qoraal ah
Waa wax caadi ah oo la sameeyo luuqada autolisp ee barnaamijka, waxay noo ogolaaneysaa in aan nuqul ka bixino macnaha qoraalka la soo xulay, iyo in la dhiso qiimaha qoraalka labaad ee la doorto.
Si aad u isticmaasho habdhaqankan, waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku dheji faylka lisp ee AutoCAD, adigoo isticmaalaya joornaalada Codso ama si sahlan oo loo daabacayo faylka iyo ku dhajinta AutoCAD.
Ku qor magaca amarka: RT
Dooro qoraalka, kaas oo aad rabto inaad hesho qiimaha.
Dooro qoraalka, kaas oo aad rabto inaad beddesho qiimaha hore ee la helay.
Sida aad arki karto, jadwalku waa mid sahlan, laakiin waa arrin waxtar leh marka ay timaado qoraalka qoraalka.
Waa in la ogaadaa in luqadda loo adeegsado hab-dhaqameedkan ay si cad u noqoto AutoLisp, markaan cusub soo saarno waxaan ku soo bandhigi doonnaa isla amar laakiin waxaan ku qoranahay VisualLisp, taas oo aan ku eegi doonno in cabbirka dhismuhu sii yareeyo.
27. Beddel tirada tirada jajabka ee qoraalka iyada oo aan laga badinin qiimaha asalka ah
Tani joogtada carrab la'aan kuu ogolaanaya in aad bedesho tirada meelaha jajab tobanle soo xulay text aan laga badinin tirada asalka jajab tobanle, in aad muujiyaan karaa dhowr tusaale ahaan tobanlayaasha 2, laakiin gudaha ku leeyihiin guriga cusub ay qiimo asal ahaan ku qeexan.
Qalabkan cusubi waxa kaliya oo lagu heli karaa amarkan, maaddaama uusan ku taxnay sanduuqa Xiriirinta Qalabka.
Lisp wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho tirada jajab tobanle ama helitaanka lambarka asalka ah ee qoraalka horay loo soo dhigay qaabkan, sidaas darteed waxaad taqaanaa inta jajab tobanlaha ah ee aad asal ahaan lahayd haddii aad rabto inaad dib u dhigto qiimaha asalka ah.
Waxaa xusuus mudan qiimayaashan asalka ah ayaa weli ah inkastoo faylka ama AutoCAD la xiray, markaa waxaad haysataa amniga xogta asalka ah Qiyamkaagu had iyo jeer way joogaan, xitaa inkastoo ay dib u soo celinayso qiimaha asalka ah ee qoraallada.
Amarkan cusub ayaa la barbar dhigi karaa tallaabada in la beddelo jajab tobanlaha ah, laakiin kormeerka kaliya ayaa ah in hantidu ay tahay mid gudaha ah iyo sida aan hore u sheegnay daaqada guryaha ma aha mid diyaar ah si ay u muujiyaan hay'adaha taariikhda dheeraadka ah.
Waa in tixgelin gaar ah la siiyo qoraallada la soo xulay waa qoraalo tirooyin ah, taasi waa, waxay kaliya ku jiraan tirada, tan iyo haddii kale qiimaha ay u beddeli doonaa «0.00«.
Ku qor magaca amarka: AREDE
Dooro mid ka mid ah fursadaha aad rabto in aad qabato
Dooro qoraalka (numeric) ee aad rabto in aad qabato qaliinka
28. Isku dheji qoraalo dhowr ah oo ku saleysan doorashadii ugu horeysay
Routine ayaa la soo cusbooneysiiyey AutoLisp taas oo noo ogolaaneysa in aan isku habayno qoraalo dhowr ah oo ku saleysan midka koowaad ee la doortay.
Barnaamijka ogol simaya qoraalka vertical (columns) ama dadban (safka), waayo, waa in ay doortaan ugu horeysay, taasoo u noqon doonta aasaas u ah jebisay qoraallada kale oo kaliya.
Waxa xusid mudan, meesha ugu qaaday ee ay ku saleysay simaya qoraalka waa dhibic galinta, hadday dhammaantood wax dhibic galinta text waa sida xaq "Left", oo dhan waafajiyaan si ixtiraam leh in ay marayso iyo waxay noqon doontaa in lays direyska. Haddii qoraallada ay leeyihiin kala duwanaansho kala duwan, dhammaantood waa la jaan qaadi doonaa iyada oo la tixgelinayo meesha ay ku xiran tahay kuwaas oo ka dhigaya in isku xirnaanta qoraalada aanay ahayn labis.
Ku qor magaca amarka: alit
Dooro qoraalka aasaasiga ah ee laga helayo fiilada isku xirka
Xulo qoraalka si aad uhesho
Qoraaga, qoraallada ayaa la jaanqaaday iyada oo ku saleysan xulashada ugu horeysay
29. Qaadee dhererka qoraalka oo u dhig qoraalada kale ee la soo xulay
Jadwalkani wuxuu abuuray AutoLisp koobi dhererka qoraalka la soo xulay waxaana uu dejiyaa qoraallada la doorto ka dib, bedelida dhererkooda.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay qoraalka 3, hore ayaa height ah 3 iyo laba soo socda waxay leeyihiin height ah 6 oo aad rabto in labada labaad ayaa sidoo kale waxay leeyihiin height ah 3 halkii 6, kaliya marka hore dooro qoraalka ah oo dhererkiisuna wuxuu leeyahay 3 ka dibna qoraallada leh dhererka 6.
Ku qor magaca amarka: CA
Xulo qoraalka dhererkiisu yahay midka aad rabto in aad nuqul ka sameysid ama aad dhigato.
Dooro qoraallada aad rabto inaad bedesho dhererka ugu horreeya ee la doortay
30. Xulo qoraalka oo qiimeeyo qiimaha laga helay sifooyinka bakhaarada
Barnaamijkan wuxuu ka dhigay in AutoLISP iyo carrab la'aan Visual, dooran kartaa qoraalka, nuqul qiimaha content iyo dhigay (update) in sifo ah in uu yahay qayb ka mid ah block a.
Ie haddii aan doonayso inaad cusboonaysiiso sifo ah block kasta by qoraalka ah ee hadda jira, si fudud u dooro text ugu horeysay ka dibna sifo iyo waxa lagu updated doonaa sidii qiimaha qoraalka la doortay.
Ku qor magaca amarka: cta
Waxay doortaan qoraalka ku jira qiimaha lagu koobi karo.
ugu dambeyntii dooro sifo loo beddelo qiyaasta
Sida aan aragno, taladani waa mid faa'iido leh haddii aan rabno inaan cusbooneysiinno qiimaha sifo laga soo qoro qoraal gaar ah.
31. Beddel dhererka qoraalada sida boqolkiiba la galay
Nidaamkani wuxuu abuuray AutoLisp wuxuu noo ogolaanayaa in aan wax ka badalno qoraalka qoraalka la soo xulay adoo bedelaya boqolkiiba inta lagu galo.
Tusaale ahaan haddii aad leedahay laba qoraalo, mid leh dherer 0.5 iyo kan kale ee leh dhererka 1.00 oo galaya boqolkiiba 1.5, dhererka qoraallada ayaa badali doona kuwa soo socda: 0.75 iyo 1.5 siday u kala horreeyaan.
Nidaamkani waa mid aad u faa'iido leh marka loo baahan yahay in lagu sameeyo isbeddelka dhererka qoraallo badan oo leh heer sare.
Ku qor magaca amarka: ch
Ku qor boqolkiiba isbedelka dhererka qoraalka, tusaale ahaan: haddii aad gashid 0.5, dhammaan qoraallada waa la dhimayaa kala badh, iyo haddii aad galayso 2, dhammaan qoraallada ayaa koraaya labanlaab
Dooro qoraallada aad rabto in aad wax ka beddesho
32. ROUTINE LISP TO LAGU QAADO MACLUUMAADKA KALA DUWAN EE BULSHADA
Markaad leedahay boodh dabeecado badan, waa mid aad u adag in la tirtiro waxyaabaha badan ee iyaga ka mid ah, sida caadiga ah laba jeer guji shayga la soo xulay, sug in ay ku dhejiyaan wadahadalka oo ay sii wadaan si ay u tirtiraan content.
Si looga fogaado shaqadan adag, marxaladan yar yar ayaa kaa yarayn doonta waqtiga aad qaadatay inta lagu gudajirayo hawlaha kor ku xusan. Iyada oo amarkaa waxaad kaliya u leedahay inaad doorato sifooyinka aad rabto inaad tirtirto content.
Waa inaad xaqiijisaa in qoraallada ku jira dhismaha ay yihiin sifooyin (mararka qaarkood isku dhexfurno iyaga dhexdooda), si ay si joogto ah u shaqeeyaan. Mind, amarkan Kaliya waxay tirtirtaa mawduuca sifaha, laakiin maaha sifaha laftiisa.
Ku qor magaca amarka: BCA
Xulo sifooyinka baqshada oo aad rabto inaad tirtirto waxyaabaha ku jira.
33. KA HELI KARO MUUQAAL MUWAADIN KA QAYBGALINTA MACLUUMAADKA MAGANGALINTA IYO KORONTADA DHAMMAAN
Waqtigaan ka hor waxaan idinla wadaagay jadwalka oo kakoobay qiimaha qoraalka oo wuxuu ku dhisay qoraal kale oo la soo xulay, waqtigaan habkaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho qiimaha qoraalka la soo xulay oo wuxuu u dhigi doonaa qoraalo dhowr ah oo aad dooratid.
Adeegsiga amarkan cusub waa mid aad ufudud, kaliya waa inaad ka xulataa qoraalka meesha aad rabto inaad ka dajiso qiimaha kadibna waa inaad doorataa dhamaan qoraalada aad rabto inaad ku badasho qiimahan cusub.
Ku qor magaca amarka: RTN
Dooro qoraalka qoraalka ah ee qiimaha lagu koobi karo
Dooro qoraallada lagu bedeli doono qiimaha cusub
Riix Furaha Furaha si aad u joojiso amarada oo aad u cusbooneysiiso Qoraallada leh qiimaha cusub
34. KA BADAN OO KU SAABSAN WAXYAABAHA KA BADAN YIHIIN AMA KA HELI KARO HEERKA QORAALKA
Waa lisp oo ka kooban labo amar: Kordhinta iyo dhimista, amarradan waxay u oggolaanayaan inay badalaan dhererka qoraalka la soo xulay, kordhinta ama yaraynta xajmiga sida ku xusan amarka la xushay.
Isbedelka cabbirka ayaa loo sameeyaa tixraac kasta oo lagu sameeyay qoraalka waxaana loo sameeyaa iyadoo loo eegayo qodobbada lagu tilmaamayo xeerka kumbuyuutarka ee luminta, arrintan waa 1.2. Heerka hore ee qoraalka waxaa lagu dhuftay by 1.2 mar kasta oo aad gujiso ama u kala qeybso 1.2, ku xiran tahay amarka aad dooratay.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida qoraalka u sareeyo mar kasta oo qoraalka la riixo, jadwalku wuxuu muujiyaa dhererka soo baxay ee isbedel kasta oo lagu sameeyay qoraalka.
Amarkani waa mid aad u faa'iido badan marka aad rabto in aad kordhisid ama aad hoos u dhigtid dhererka qoraallada ee qiyaas ahaan, adigoon haysanin dherer kama dambeys ah, kaliya muuqaal ahaan.
Ku qor magaca amarka: AU (si loo kordhiyo) | RE (si loo yareeyo)
Riix qoraalka si aad u kordho ama u dhinto xajmiga inta jeer ee aad u tixgeliso
Riix Furaha Furaha si aad u joojiso amarka
35. KALA DUWAN QAADASHADA WAQTIGA LAGU QAATO WAQTIGA LAGA HELO
Jadwalka soo socda ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho cabir cabbir ah (cabbir), qiimaha la helay waxaa lagu soo bandhigayaa, kaas oo aad nuqul ka dhigi kartid tusaale ahaan Microsoft Excel iyo qiimaha kasta waxaa loo dhigi doonaa safar gooni ah.
Ku qor magaca amarka: DimX
Gali tirada jajab tobanlaha cabbirada si loo qaado (3 default default)
Xulo cabbirada si aad u hesho cabbiraaddaada
Riix Guji si aad u joojiso xulashada oo aad ku muujiso shaashadda qiimaha la helay
36. WAXYAABAHA LAGU QAATO MUUQAALKA KA QAYB QAATO LAMBARADA LAMBARKA MAGAALADA
Joogta ee VisualLisp wuxuu u oggolaanayaa inuu kordhiyo qiimaha lambarrada qoraallada la doortay. Tilmaame-yaashan lagu sameeyay VisualLisp wuxuu u oggolaanayaa inuu kordho qiimaha lambarrada qoraallada la doortay (midba hal) marka loo eego korodhka kore.
Haddii qiimaha la tilmaamay uu yahay tiro taban, qiimaha xigta waxay noqon doontaa hoos u dhaca qiimaha bilowga ah.
Tusaale ahaan, haddii qiimaha bilowga ahi yahay 1, qiimaha kor u kaca ee 1 ayaa la gelayaa, tirooyinka xiga ee la soo xulay waxaa lagu kordhin doonaa hal cutub, 2 xiga, 3 ee xiga, iyo wixii la mid ah.
Ku qor magaca amarka: Inc
Dooro qoraalka qiimaha bilowga
Xulo mid ka mid ah dhammaan qoraallada aad rabto inaad beddesho
Lisp for topography iyo 3D
37. Ku beddel 3DFace hay'adaha adag ee ACIS
Qaar ka mid ah waqti ka hor Waxaan soo this carrab la'aan joogtada ah oo xiiso leh iyo inkastoo waayadan Anigu ma aan isticmaalo, mar kasta oo aan u baahnaa si wayn ii caawiyay la xisaabinta mugga, dheeraadka this in daqiiqado ah in 3D sokeeye ma i siin natiijada aan u baahanahay .
Waa hab caadi ah taas oo xulashada walxaha 3D, iyaga oo si wadajir ah iskugu xiraya una geynaya hal shay oo 3D ah, isticmaalka waa mid sahlan oo keliya ku filan si loo doorto shayada iyo hab-dhaqameedku wuxuu qaban doonaa shaqada oo dhan.
Wixii qadarin weyn ee isbeddelka ah ee jadwalka ka dhigaya walxaha, waxaad u baahan tahay inaad aragto 3D, haddii kale aragtida dhirta looma ogaan doono heerarka sare ee 3D Solid, maxaa yeelay xoogga waxaa loo abuuray weji kasta oo la soo doortay, oo ah "hoos u dhig" ee xawaaraha x ee hadda, ilaa diyaarad iyo fogaansho uu tilmaamayo isticmaalaha.
Si loo hubiyo in dhammaan qaybaha meshka la soo saaray sida adag, masaafadaasi ma noqon karto eber, laakiin adag ayaa la goyn karaa goor dambe haddii loo baahdo dhumucda loo baahan yahay, iyada oo la adeegsanayo howlaha booliska ama xayiraadda qashinka. Xooga soo dhalaalay waxaa loo abuuray lakabka hadda.
Haddii dhamaadka ururka mid ka mid ah dhadhanka yaryar, Hawlgalku wuxuu joogsadaa ama ka xiraa sababta oo ah xaddidaad xusuusta, waxaad isku dayi kartaa inaad ku biirto iyaga gacanta.
Xasuusnow inaad tixgeliso:
Haddii wejiyaal wejiyadoodu aanay lahayn iskudhacyo isku mid ah, waxaa jiri doona boogo aad u yar ama isku dhafan inta u dhaxeysa xaddiga adag ee laga soo qaaday, taas oo noqon karta sababtoo ah AutoCAD awood uma yeelan karto inay ku biirto xaddiga, oo muujinaysa farriimaha soo socda:
«Maqnaanshaha iskudubarida isgoysyada isgoyska.
"Macluumaad aan khilaafsaneyn oo ku yaala vertex iyo isku-duwaha iskaashiga."
«Xidhiidhka is-weheshi-geeska ah.
«Cilaaqaadka jidhka oo aan is-qabin.»
Haddii dhibaatooyinku ay sii socdaan marka ay soo saaraan mid adag, waa inaad nuqul ka dhigtaa meel yar oo ka dibna isku-darka nuqullada asalka ah iskuday si aad u buuxiso dhammaan khariidadda 3DFace oo mar kale isku day mar inta dhibaatada la xaliyo.
Ku qor magaca amarka: F2S
Xulo 3D si aad ugu beddesho mid adag
Ku dhaji dhererka (hoos) ee ka iman doona mid kasta oo ka mid ah xayawaanka 3DF
Geli jidka si aad u dhalisid mid adag: Gaar ah ama gacanta
38. Waxay ku dhejisaa cabbirrada xuduudaha bannaanka ka ah heerkoodu
Marar dhowr jeer ayaad ogaaneysaa in aad kuxirantahay faylka, laakiin kuwani ma laha qoondadooda, iyada oo loo marayo nidaamkan, waxaad ku dhejin kartaa cabbirada heerarka sare ee heerarka sare ee aad rabto.
Cabbirada la geliyo waa liis ay ku jiraan sifooyinka, kuwaasi waxaa lagu abuuray sawir millimitir. Si aad u isticmaali karto lakabkan dhib la'aan, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho amarka «UNITS»(Units) wuxuu qeexayaa cutubyada mowduucyada la geliyo«milimitir»(Millimeter).
Waxaa habboon in la caddeeyo in jadwalkaan si loogu dhejiyo dhererka saxda ah ee khadadka wareegga, waa inay lahaadaan kor u qaadis (iskudubarid z> 0), maaddaama kor u kaca laga helayo barta lagu tilmaamay qalooca xuduudaha Haddii khadadka wareegga wareegga 0 (iskuduwaha z = 0), taas oo ah, iyagu ma laha kor u kac, jadwalka caadiga ah wuxuu soo gelinayaa qoraal leh qiimahaas.
qiyaasta la codsaday by caadiga ah waxaa loola jeedaa iskeelka in la dhakrayeen doonaa sawirka, waa qiime ah benchmark text aragti size in la geliyo, waxaa lagaa baari karaa by badaneyso ama ay yaraaneyso qiimaha this ilaa aragti ah la geliyo la cabbirka qoraalka aad rabto.
Nidaamkani wuxuu leeyahay 2 lifaaqyada: EL_TAG.dwg y EL_TAG2.dwg, waa qodobada leh sifooyinka kor lagu sharraxay, faylashaas waa la daabacin karaa meel kasta, inkastoo lagu taliyay in ay ku jiraan isku midka caadiga ah sida caadiga ah.
Si AutoCAD u rakibto faylashaas, waa inaad qeexdaa wadada goobta AutoCAD ee sanduuqa wada-hadalka Ikhtiyaarrada-> Taageerada Faylasha Jidka.
Ku qor magaca amarka: CPE
Waxay tilmaameysaa dhibco ka sarreeya khadka xajinta heerka iyo meesha aad rabto in cabbirka la geliyo
Muuji tilmaame kale si loo qeexo wareegga in uu yeelan doono cabbirka lagu geliyo
Waxaad sii wadi kartaa inaad geliso cabbiro dheeraad ah oo tilmaamaya meesha aad ku gali karto, haddii aadan rabin inaad geliso cabbiro dheeraad ah, riix Enter key si aad u dhamayso amarka
39. Sawir xariiqyada gooyo ama buuxi dhinacyada
Habdhaqankani wuxuu soo saaraa khadadka jajabka ee la jaray ama la buuxiyo, xariiqyadan xawaaraha ayaa lagama maarmaan u ah inay tilmaamaan ama matalaan la'aanta u dhaxeysa meeraha.
Si loo abuuro khadka xajmiga leh nidaamkan, macluumaadka 6 waa in la galaa kaas oo u oggolaan doona in xariiqa xuduudaha la abuuro sida la filayo.
Macluumaadka soo socda ayaa looga baahan yahay:
Masaafada u dhexeysa xariijimaha jiifka (m): Halkan waa inaad soo gashaa kala goynta u dhaxaysa xariiq kasta oo ah jiir.
Xulo polyvin oo ah cabbirka ugu sarreeya: Marka jiiradu ay farqiga u dhaxeyso laba saf oo dhinacyo ah, halkan waa in lagu tilmaamaa in cirifku yahay mid ka mid ah cabbirka ugu sarreeya.
Xulo ciqaabta qiyaasta ugu hooseeya: Qodobka ugu yar ee cabbirka ugu hooseeya waa in sidoo kale la tilmaamaa.
Jar ama Buuxi?: Jihada sawirada bilawga xadhigga qulqulka waxay ku xiran tahay in uu yahay gooyo ama buuxin, adigoo ku dhajinaya badhanka Furaha, waxaa loo qaadanayaa qiimaha "R" ee buuxinta.
Dhererka xadka ugu sareeya: Haddii qiyaasta ay ka yar tahay masaafada loo maro cagta cagta, waxaa la ogaanayaa in khadka uusan ku dhicin xariiqda xajmiga, haddii la doonayo in jiirada cirifka weyn ee cirifka wuxuu gaari karaa isgoyska xudduudaha cirifka lugta, qiimaha weyn sida 200 ama 500 waa in lagu tilmaamaa.
Masaafada u dhaxeysa kursiga talus: Waa kala tagsanaanta in lugaha ay yeelan doonaan.
Waxaad fiirin kartaa garaafyada soo socda si aad u fahamto sharaxaadda:
Halkan dhererka ugu dheer ee xariiqa xajmiga ee 5m ayaa la tilmaamay.
Tani waxay muujisay dherer ah ugu badan ee 200m jiirada khadka (qiimaha dhabta ah aan la muhiim ah siinayo oo kaliya qiimaha lagu buunbuuniyey si marka line laayeen intersects cagta ee dhaadhaca, si toos ah u jaray).
Waa inaad haysatid lakabka hadda ee ku jiri doona khadadka yaryar si loo abuuro, tusaale ahaan: «Khadadka xawaaraha«.
Ku qor magaca amarka: iwm
Ku qor macluumaadka codsiga amarka.
40. Sawir xarig leh jiir oo tilmaamaya
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dhejiso khadad aad ku muujisid jihada aad ku muujinayso, kaliya tilmaamayso xariiqda galinta xariiqda iyo jiirada oo lahaan doona.
jiirada waxaa ka muuqata qaraabo qiimaha si 1 ah, tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad ka dhaansado line la jiirada a of 2: 1, kaliya waa tilmaamaya sida jiirada for line tirada 2 ah, haddii dhaadhaca in la helay waa 1: 1.333, waa inaad gelisaa 0.75.
Wixii faahfaahin dheeri ah, haddii aad rabto inaad heshid dhinacyada qiimaha 1 marka hore (1: x), waa inaad u qeybisaa nambarka 1 ee dhexdhexaad ah (x).
Ku qor magaca amarka: DT
Muujisaa xariiqda galinta ee xariiqda
Gali jugada kaas oo lahaan doona line sida kor lagu sharxay
41. Ku sawir xariiq leh jiirada la tilmaamay
Iyada oo qaab-dhaqameedkan fudud ah waxaad ku dhejin kartaa xariijin leh jiirada aad ku muujinayso, tani waa ku filan inaad ku muujiso xarriiqda galinta ee xariiqda iyo xawaaraha uu yeelan doono.
Khadka ayaa la sameeyay iyadoo la dhejiyay dherer dherer ah oo ka mid ah unugyada 10 iyo dherer dhererkiisu yahay qiimaha jaangooyo ee u dhaxeeya 10.
Ku qor magaca amarka: LP
Gali jiirada oo lahaan doona xariiqda boqolkiiba (ejm: 12), iyada oo aan laheyn calaamad boqolkiiba
42. Xisaabi qaybaha cutubka iyo buuxinta qeybaha kala duwan
Iyada oo jadwalkan loo yaqaan "lamppipe" waxaad ka heli kartaa meelaha laga gooyo iyo buuxinta meelaha laga soo galo qaybta iskudhafka ah ee leh khadka dabiiciga ah iyo xariijinta daaqa (qaybta waddada kama dambaysta ah).
Qodobkan si aad u ogaatid goobaha, waa inaad sameysid xulashada dhulalka iyo daaqsinka daaqa, amarkuna wuxuu ku weydiin doonaa dhibic si loo geliyo qoraallada goobaha u dhigma.
Ku qor magaca amarka: AREAS
Xulo jajabyada jidka asalka ah (Terrain Natural)
Waxay doortaan iskudhafka wadada (Roma ama Sub-Slider)
Muuji tilmaamaha qoraalka meelaha la helay
Faylka CAD ah waxaa sidoo kale ku jira feylka .rar faafin dheeraad ah oo ku saabsan jadwalka.
43. Geli dhejiyada qariirada dhererka
caadiga ah Tani waxay u ogolaaneysaa in aad geli gitaarka ilaa profile a gaadhya (polyline ama line), si ay si fudud oo kaliya dooro profile ah (polyline) oo tilmaamaya dhibic u dhigma meesha uu taagan qoraalo waxay muujinayaan dhaadhacyadii.
Haddii ay tahay amarka line a xisaabi kaliya dhibcood dhamaadka, Markay heli waayeen in dhaadhaca, in kiiska su'aasha polyline ah, joogtada ah ee hesha vertex walba bilowga ah iyo final oo xisaabinaya jiirada oo ay ku jiraan dhammaan qeybaha of polyvin.
Qoraalka tilmaamaya jiirada la helay waa nooca tusaale ahaan: «P = 1.11% ee 10.49 m»Sidaad ogtahay, qaabkan ayaa la badali karaa si loo waafajiyo habka shaqada mid kasta oo idinka mid ah.
Sida jadwalka hore, qaabka qoraalka ee hadda waa inaysan ku fikirin dherer, haddii qalad la sameeyay iyo meelo aan la galin.
Miisaanka lagu tilmaamayo bilowga habraaca waa kaliya ee qiyaasta qoraallada oo aan saameyn ku yeelan tallaabooyinka la qaaday si loo xalliyo wareegyada.
Ku qor magaca amarka: PNF
Gali miisaanka qoraallada calaamadaha la helay si loo geliyo
Dooro profile si aad u xisaabiso dhinacyada
waxay tilmaamaysaa tixraac tixraac ah si aad u gelisid qoraallada leh cirifka
44. Ku calaamadee calaamad ku taal gees-ka-gacmeedka
Jadwalkani waa habayn la mid ah kii hore oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gashato calaamad dhammaan xuruufta calaamadda ah ee aad dooranaysid, uun uun dooro.
brand geliyo waa file a sawir (block) loogu talagalay miisaan gaar ah, laakiin si buuxda customizable, aad edit karaa sawir kasta, waa mid ixtiraamaan dhibic xarunta oo dhan (kiiskan bartamaha goobada block ).
Qodobbada sirta ah ee faylka waxaad dooran kartaa inaad geliso goobada halkii aad ka soo gali lahayd block, sababtoo ah inaad kaliya ka qaadato faallooyinka xariiqda ku jira koodhkan oo ka faalloodaya xariiqda gundhiga ah.
Ku qor magaca amarka: IMA
Xulo sharraxaadda aad rabto inaad calaamadiso calaamadaha
Waxay tilmaamaysaa waddada iyo magaca feylka la dhoofiyo
45. Helitaanka xawaaraha qadka la soo xulay
Barnaamijkani wuxuu ka bilowday AutoLisp, wuxuu u ogolaanayaa inuu helo qiimaha jaanguska ee xariiq la soo xulay.
Waa in la ogaadaa in amarkani uu kaliya ku shaqeeyo khadadka, haddii aad haysatid makiinad alwaax ah waa in ay qarxiyaan ama soo saaraan xariiq ka sarreeya muraayadda.
Ku dhaji faylka lisp ee AutoCAD.
Ku qor magaca amarka: TL
Xulo xariiqda aad rabto in aad hesho jiirada.
Macluumaadka la helay waa jiirada H: V.
46. XADIIMAHA PACK ROUTINES ee QIIMEYNTA DHIBAATOOYINKA - QAYBTA 3: DIIWAANGALINTA HORUMARINTA LAGU QAADO Qeybaha WALL
Iyada oo joogtada ah waxa aad la abuuro profile ah (u qaadis) derbiga oo ilaashan, profile this waxaa la samayn karaa ka xogta qaybaha iskutallaabta of derbiyada of, xogta waa kuwan: Progressive, Cota Cota Corona iyo aasaaska.
Macluumaadka miisaanka ee codsaday amarka, ma aha tixraaca miisaanka qiyaasta ee profile (profile waxaa la abuuray cabirka toosan oo siman u dhigma) laakiin qiyaasta miisaanka ee qoraallada qoraallada (cabbirka iyo xogta kale).
Si loo abuuro profile, waa ku filan in marka hore xulo horumarka qaybta, ka dibna cabbirka taajkii iyo ugu dambeyntii cabbirka hoose ee aasaaska.
Waa inaad qaadataa daryeel gaar ah marka aad dooratid xogta tan iyo haddii aadan dooran qoraalka oo aad gujiso shaashadda, amarku wuxuu u qaadan doonaa sidii uu u dhammeeyey xulashada xogta si loo abuuro astaanta.
Iyadoo la raacayo nidaamka caadiga ah ee faylka CAD ah ayaa la bixiyaa, oo leh qaybo iskutallaab ah oo derbi ah, tusaale ahaan in lagu dhejiyo jadwalka jimicsiga.
Ku qor magaca amarka: MUP
Ku qor miisaanka (qiyaasta) qoraalka qoraalka (tusaale: 75)
Waxay doortaan qoraalka cabbiraadda taajka
Waxay doorataa qoraalka hoose ee aasaaska
Marka aad dhammaysato xulashada dhamaan qaybaha derbiga, riix Ku qor oo tilmaamaya dhibicda bidixda sare ee taararka profile ee derbiga la soo saaro.
47. XADKA BULSHADA SIDA LOOGU TALAGALAY DAWEYNTA DHIBAATOOYINKA - QAYBTA 3: SIZE (LAGU QAADAY) QAYBTA DHAGAYSIGA
caadiga ah waxa uu kuu ogolaanaya in ay size (dhuuban) qaybta ka mid ah derbiga ahbaa la joogtada daabacay hore (tan waxa ay leedahay shuruudaha design isku mid ah), natiijadu waa sida image soo socda (cabbirka kala duwan sida ay dhinacyada derbiga).
Nidaamkani wuxu waydiinayaa miisaanka loo yaqaan 'dimensions' kaasoo la soo saarayo, qiyaasaan kaliya waxay tilmaamaysaa kala-soocida u dhexeeya xarriiqyada cabbirka, xajmiga iyo qaabka cabbirka waxay ku xiran yihiin qaabka cabbirka hadda iyo tan waa in horey loo soo saaraa isticmaalaha miisaanka la shaqeynayo.
Si aad u dhalin berms waa in la Socota sida kaliya ee caadiga ah ee hore u dhalin derbiga, dhibic xusay qaybta jiirada garabka ee wadada ku, dhinaca halkaas oo loo baahan yahay derbiga oo sarajooggeeduna wuxuu tilmaamay iyada oo loola jeedo ikhtiyaarka si loo muujiyo dhibic hoose ee aasaaska darbiga.
Waxaa xusid mudan in habdhaqanku uu xaddidayo qayb ka mid ah derbiga oo ka soo jeeda qaabka hore ee boostadamaaddaama ay isticmaasho sharuudo isku mid ah sida qaybta derbiga, waxaad ku badali kartaa koodhka hawlaha xisaabinaya qodobada haddii aad rabto inaad dalbato nooc kale oo derbi ah.
Ku qor magaca amarka: MUD
Geli cabirka kala-saarista inta u dhaxeysa khadadka cabbirka
Waxay tilmaamaysaa dhibic tixraac ah (P1 ee sawirka) derbiga
Muujisaa jihada derbiga (bidix ama midig)
Waxay muujisaa dhibic hoose ee qaybta derbiga (P2 ee sawirka)
48. WARQADAHA 3 SI JOOJINTA DHIBAATOOYINKA - QAYBTA 1: DIB U QAADASHADA Qeybta WALL
caadiga ah Tani waa tii ugu horaysay ee 3 u dhalin gabiyada nooca cuf, waqti hore waxaan sidoo kale kula wadaagi caadiga ah in ahbaa derbiga oo ilaashan, wakhtigan caadiga ku abuuraa derbi la design kala duwan (tallaabooyin).
Waa in la xusuusnaado in shuqullada tahay waddo (derbiyada, kaabadaha, iwm) ma yihiin had iyo jeer design isla shaqo kasta, design tani waa shaqo ah qodobo badan isla aagga ee dhismaha.
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku abuurto derbi xajin leh shuruudaha soo socda:
Si loo abuuro, waa inaad tilmaantaa garabka garabka ee qaybta wadada, dhinaca dhinaca derbiga ee loo baahan yahay, Lisp-ka waxaad ku abuuri kartaa darbiga dhinac kasta, taasna waa inaad ku tilmaantaa jihada (bidix ama midig).
Marka la eego dhererka, tan waxaa lagu qeexay isticmaalka xulashada 2, marka koowaad waa dherer la qeexay (H) iyo ikhtiyaarka labaad waa in lagu qeexo hoosta hoose ee aasaaska derbiga, dhererkani waxa lagu tilmaami karaa dhibic shaashadda, barnaamijku wuxuu mas'uul ka yahay xisaabinta dhererka iyo dhammaan tallaabooyinka kale ee laga qaado.
Barnaamijka waxaa loo diyaariyey inuu qaato labada shuruudood ee derbiga dhererkiisa: qiyaasta koowaad waa derbi leh dherer joogto ah, halkaas oo saldhigga aasaasiga ahi aanu ahayn mid hooseeya qiyaasta labaad (kuwa ugu badan loo isticmaalo) waa in dhererka derbiga uu yahay mid isbeddela, halkaas oo saldhigga aasaaskiisu yahay mid hooseeya oo aan raacaynin xawaaraha wadada.
Habka loo isticmaalo baalkalku wuxuu ku xiran yahay qof kasta, oo arrintan ugu habboon waa in aad marka hore abuuri karto qorshe derbi ah adigoon ku caawino habdhaqan kasta, sidaasi waxay noqoneysaa mid sahlan inaad fahamto isticmaalka saxda ah ee qadadan.
Ku qor magaca amarka: MUS
Waxay tilmaamaysaa dhibic garbaha dhinac ka mid ah dhinaca dhinaca soo socda
Dooro sidaad u qeexi lahayd dhererka derbiga (dhererka ama dhererka aasaaska)
49. WAXYAABAHA SI LOO HELI KARTAA WAXYAABAHA WAXYAABAHA
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawir ka qaadato darbiga dariiqa culus ee wadooyinka, cabirada ay derbigaan ku jiraan qashinkaas waa had iyo jeer isku mid ah (waa joogto yihiin), qiyaasta kaliya ee isbedeleysa waa dhererka derbiga.
Qodobyada derbigan ayaa la soo saaraa laga soo qaatay cabirada qaab-dhismeedka derbiga ee gaarka ah, haddii la doonayo in lakabkani derbiyada la soo saaro tallaabooyin loo habeeyay, waa inay beddelaan tallaabooyinka lagu qoray barnaamijka gudaheeda .
Kadib waxaad arki kartaa garaafka soo socda, kaas oo ku jira dhibcooyinka leh derbiga la sameeyay:
Ku qor magaca amarka: MU
Muujisaa meesha laga bilaabayo jiilka derbiga
Geli dhererka derbiga
50. ROUTINE LISP TO GENERATE THE PROGRESSIVE OF SHARCIYADA
Xilligaan faa'iido leh ayaa yimid waqtiyadii hore iyo kuwa doonaya in ay soo saaraan iskudhacyo fudud oo aan loo baahnayn in ay soo saaraan qaybaha kala duwan ama qaybaha dheeraadka ah ee isku midka ah, waxay ka faa'iideysan karaan nidaamkaan.
Jadwalku wuxuu leeyahay interface interface dialog taas oo kuu ogolaaneysa inaad qaabeyso qaabka ugu dambeeya ee horumarka geliyay mashiinka.
Si aad u isticmaasho jadwalkaaga waa inaad leedahay polyvin (isku xir) oo raac talaabooyinka soo socda:
Nuqullada 3 ku duub hal mid ee wadooyinka taageerada ee aad AutoCAD-kaaga
Faylka faylka lisp ee AutoCAD (leh APPLOAD).
Ku qor magaca amarka: horukac
SANDUUQADDA ARDAYGA, qeexaan qaabka horumarinta ee la soo saaro.
Xulo polyvin (isku dhejinta) kaas oo horumarineed lagu sameyn doono.
Waxay tilmaamaysaa dhibic, kaas oo noqon doona bartilmaameedka jiilka horumarka.
51. ROOFIN KA HELI KARO KA HELI KARO SIDA LAGU DHACAY
Tani waa mid ka mid ah jadwallada ugu dhamaystiran ee soo saarida habka qaabka muddada dheer. Iyada oo si fudud loo doorto laba polylines 2D (dhulka iyo daaqa), joogtada waxay abuuraysaa qaabka profile oo leh dhammaan xogta loo baahan yahay in la soo bandhigo.
Si loo helo jiilka of this profile in uu noqdo guul, polylines loo doorto waa in suurto gal ah in 2D, haddii kale qalad ah ayaa dhici kara hawlgalka.
Nuqul faylasha 3 ee la soo dejiyey mid ka mid ah wadooyinka taageerada ee AutoCAD
Faylka faylka: profile profile ee AutoCAD (oo leh APPLOAD).
Ku qor magaca amarka: profile
Sanduuqa kuxiran ee kuxiran, ku dheji «Macluumaadka»Oo guji on the«Dhul»Iyo«Dhibco»Si aad u dooratid dhulka iyo bacalka qoto dheer
Haddii aad rabto inaad qeexdo xogta kale ee sanduuqa wada-hadalka ka hor inta aan la sameeynin profile (optional)
Waxay muujineysaa dhibic galinta sare ee profile si loo abuuro
52. KA DHACAY MUWAADIN MUHIIM AH OO LAGU QAADO ARCOS CALAAMADAHA MAWDUUCA
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto masaafooyinka dhan ee sawirka sawirka ama kaliya kuwa aad dooratid, oo ku tusaya natiijooyinka ku darista ee amarrada amarrada.
Ku qor magaca amarka: sumcada
Xulo kabaha sawirka aad rabto in aad ku darto, haddii aad rabto inaad doorato dhammaan kabaha, riix furaha Ku qor ka hor inta aan la codsan doorashada xulashada.
53. ROUTINE LISP TO IMPORT OF UCSS SAFAA LOOGU TALAGALAY
Jadwalkan xiisaha leh waxaa lagu abuuray AutoLisp iyo Visual Basic for Applications (VBA), waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dhoofiso UCS-ga badbaadsan ee leh magaca feyl kasta labaad ee sawirka.
Qalabkani waa mid aad u faa'iido leh haddii aad la shaqeyso diyaarado u shaqeeya UCS badan, waxaanu caadi ahaan samaynaa UCS faylka ugu horreeya, waana inaan isku siinnaa faylasha kale, habkan, kaliya u abuurtaa ugu horreyn kadibna waxaan u gudbin karnaa feyl kale.
Jadwalku wuxuu u dhaqmaa si la mid ah aaladda Designcenter, marka laga reebo in aanay lahayn ikhtiyaar u soo dejinta UCS faylasha kale. Xaaladdan marxaladan inkasta oo aysan oggolaan in jiiditaanka iyo hoos u dhacda, natiijooyinka waa la filayaa.
Kudar ama ku dar faylasha DVB iyo LSP si aad u codsatid Apcast Startup Suite.
Ku qor magaca amarka: WAXYAALAHA
Aagga Sawirka Sawirka, riix badhanka Dooro, si aad u dooratid faylka sawirada kaas oo aad rabto inaad soo dejiso UCS.
Aagga UCSs La helay, dooro UCS inaad soo dejiso oo guji badhanka OK.
54. QIIMEYNTA LISP EE KA SIIBAYA QAADKA CILMI EE MADAXA
Waad ku dhacay doonaa in ay leeyihiin polyline ah AutoCAD oo aad rabto in aad ka saarto mid ka mid ah geesaha iyo in la gaaro in aad leedahay si aad u dalbato in ka badan laba amarradiisa.
Iyadoo la raacayo nidaamkan kaliya ku filan inaad qeexdo xayndaabka galka ee aad rabto in aad ka saarto iyo arrimo la xiriira.
Si joogta ah si sax ah u shaqeeyo, marka la eego dhibicda, Tani waa inay ku taallaa cirifka si ay u baabi'iso mana aha meel ku dhow, waayo waa in aad dhaqaajiso hababka tixraaca shirkadaha, sida Endpoint ama Jeexitaan.
Ku qor magaca amarka: marinka
Dooro polyline-ka oo aad rabto inaad tirtirto xayndaab.
Waxay tilmaameysaa dhibicda vertex ee polyvin ee aad rabto inaad tirtirto.
55. DIIWAAN KA BEDI KARO DIIDMADA DHAGAYSIGA KALA DUWAN EE DEGMADA 3DFACE
AutoLISP ku qoran, ee caadiga ah ay la mid tahay mid la soo dhaafay, farqiga u yahay in waqtigan, dhoofisa ee wadataa ah geesaha ka mid ah walxaha 3Dface AutoCAD, wadataa, kuwaas oo ay ku kaydsan yihiin in file CSV ee Microsoft Excel ah, aad baray inaan sameeyo .
Soo dhoofinta dhibcaha vertex wuxuu kaa caawin karaa aad u badan haddii aad haysato saddex xagalood oo leh 3D waji oo waxaad dooneysaa inaad isku duwo inaad dib u sameysid faylkaaga isuduwahaaga.
Sidoo kale tixgelinta waxay la mid yihiin sida caadiga ah ee hore, xaalada 3Dface oo ku soo biiray isla qodobbada, sidoo kale haddii loo baahdo, tixgelinta waa in la siiyaa kala sooca iskudhafyada iyo ka saar kuwa kuwa duuban.
Isku-duwayaasha ayaa loo dhoofiyaa qaabka P, N, E, C (Point, North = Y, East = X, Dimension = Z) iyo sida loo soo dhoofiyo faylka CSV (oo ay kala soocaan malawadka), marka la furo faylka qiimaha kasta wuxuu ku xiran yahay unugeeda madaxbannaan iyo qaab amar ah.
Ku qor magaca amarka: E3D
Xulo waxyaalaha 3D ee aad rabto in aad dhoofiso iskudhafyada kuxigaaga.
56. WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY DARYEELKA CODSIGA KA BIXIYAA AMA WAKHTIGA
Mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la nuqulo, laakiin marka ay ku jiraan boodhka, waxa aynu caadi ahaan sameyno waa inaan ka faa'iideysano blockka ama laga yaabo inuu isticmaalo tifaftiraha xayiraadda, si loo kantaroolo shaqsiyaadka shakhsiyaadka ah, dooro oo koobi .
Jadwalkaan uma baahnid inaad ka faa'iideysatid xayawaan ama aad isticmaashid tifaftiraha xayiraadda si aad u nuquliso hay'ad kasta oo ku dhex jirta, kaliya qaado habdhaqankan oo xulo hay'adaha in la koobiyo.
Waxyaabaha cusub ee laga sameeyay xulashada muuqda kore asalka, sidaas haddii loo baahdo waa inaad xulato oo aad u wareejisaa booska aad rabtid.
Jadwalkaan waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka in sheyga cusub lagu abuuri karo lakabka kale, taas oo la doorto sababtoo ah marka la eego hay'adaha cusub ayaa lagu abuuray lakabka hadda.
Ku qor magaca amarka: CPL
Xulo sifooyinka baqshadda aad rabto inaad koobi ka noqoto.
Haddii aad rabto inaad dooran karto inaad bedesho lakabka kaas oo sheyga cusub la abuuray.
57. ROUTINE LISP TO TRANSFORM ARKOOYINKA POLYLININE LAGU HELI DOONADA LINEAR
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho arsraha kuxirsan iskuxirku wuxuu u dhexeeyaa qaybo toosan, dhererka qayb kasta wuxuu noqonayaa inaad sheegto doorashooyinka taliska. Luqadku waxay ka qaadataa xogta ka soo baxa qoraallada la soo xulay, oo ay ka mid yihiin joomatari articom oo waxay abuuraysaa baqshiish cusub oo leh xog cusub.
Dhererka qayb kasta oo cusub ee ku yaalla arc waxay kuxirantahay qiimaha la galay, waa in ay ka yar tahay dhererka yar yar ee curiska la soo xulay, lisp ayaa u qeybin doona asalka dhabta ah «n» qeybaha illaa inta uu gaarayo dhererka asalka ah.
Xulasho ahaan waxaad dooran kartaa inaad haysatid bacalka asalka ah, taas oo keeni doonta polyline oo la abuuro dusha sare - ama la tirtiro.
Jadwalkani wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh, tusaale ahaan, marka loo eego in ay lagama maarmaan tahay in la qeexo qodobbada marxaladda qadar xajmiga ah ee isku dhafan ama toosan.
Ku qor magaca amarka: kacaan
Xulo polyline-ka kaas oo aad rabto inaad kala beddesho qaybaha xargaha ee qaybo qumman.
Muuji dhererka qayb kasta oo ka kooban mareegta cusub "arc".
Xulo waxa la samaynayo curiyaha asalka ah ee la soo xulay, haddii aad doorato inaad tirtirto, waxaad yeelan doontaa oo keliya qashinka "polyline" oo leh qaybaha wareegsan ee loo badalay qaybo toosan.
58. AUTOLISP ROUTINE RAACIDA WAXQABADKA KA QAYBGALKA DHISMAHA EE AXIS
Jadwalkaan waxaad awoodi doontaa inaad geliso xariiqda la soo xulay (polyline) oo leh masaafadahooda, xogta ku dhejinta qodobbadan, waxay ka timaadaa nambarka digista ee fogaanta ama akhrinta faylka fogaanta (faylka Tusaale ahaan faham fiican).
Tilmaamahan waxaa loo isticmaali karaa tusaale ahaan marka laga hadlayo wadada wadada, mararka qaarkood waxaa lagama maarmaan ah in la helo horumarka saxda ah ee cirifka (polyvin), sida tusaale ahaan horumarka 23.76, waxaad gacanta ku qaban kartaa laakiin waxaad qaadataa waqti dheeraad ah, habkan oo kaliya waxaad u baahan tahay inaad doorto cirbadda, muujiso horumarka bilawga ah ee fuulka (inta badan qiimaha 0), kadibna gali masaafada.
Haddii aad leedahay masaafo aad u badan si aad u gashid fiilada, halkii aad ku qori lahayd lisp wuxuu bixiyaa ikhtiyaarka xulashada faylka qoraalka, faylkan qoraalka ah wuxuu noqon doonaa masaafooyinka iyo lakab ayaa midba akhrin doona, iyaga oo ku dhejinaya dhibicda cirbadda (polyvin).
Lakab sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad bedesho bilawga fiiqitaanka tan iyo bilowgii la go'aamiyo sida ay Bar bilaw in ahbaa polyline ah, haddii carrab la'aan bilaabo gelinaya masaafo by endpoint in aan doonayo, isticmaal ikhtiyaarka "Beddel xawaaraha«.
Marka la raaco jadwalka waa faylka CAD, oo leh fiilo fudud (polyline), tusaale ahaan hirgelinta habsocodka qadarka.
Ku qor magaca amarka: PP
Xulo sida aad rabto inaad u geliso horumarinta: gacanta (1 × 1) ama akhrinta faylka qoraalka.
Xulo mashiinka polyvinishka
Gali masaafo ama masaafo bilow ah oo ka soo jeeda qulqulka (default waa 0)
Gali horumarka ama fogaanta si aad u ogaato (marka laga hadlayo gacanta faraha, haddii akhriska faylka la doorto maahan muhiimkan)
59. ROUTINE LISP INAAD KA QAYBGALAANSHAHA KA HELI KARTAA WAXYAABAHA LAGA HELAYO MACLUUMAAD GAAR AH
Iyada oo joogtada ah tan la dhigtay AutoLISP iyo VisualLISP, waxaad geli kartaa kasta 'n' mitir dhinacyada polyline a soo xulay (dhul dabiici ah ama daaqa) ee format profile aad, cabbir la geliyo iyadoo la tixraacayo dhibic ku qoran foomka.
Xeerkan waxaad qeexi kartaa cabirka sawirkaqiyaasta Tani ma tilmaamayso qiyaasta toosan ee profile ah, laakiin baaxadda oo ka mid ah qoraallada ee dhinacyada in la geliyo, text aragti for qiyaasta 1 ah: ahaan 500 ka badan miisaanka 1 ah: 50.
Sidoo kale waxaad qeexi kartaa qiyaasta qiyaasta ee profileMacluumaad Tani waa muhiim maxaa yeelay waxa ay gacanta ku hayso qiyamka aragti in dhul profile dabiici ah siiyay 10 jeer ay size in toosan leeyihiin qiimaha aragti sidoo kale ay size dhabta 10 jeer, sidaas darteed amarka waa in si ay u qabtaan hawlaha u dhiganta inay u beddesho qiimaha inay dhinacyada dhabta ah.
Qiime kale oo galo iyo mid ka mid ah qeexaya amarkan, waa masaafada ay tahay in cabbirada la geliyo, qiimaha caadiga ah ee nidaamkani wuxuu keenaa waa 10, taas oo micnaheedu yahay in cabirada lagu dhajin doono mitir kasta 10 kasta oo ka soo jeeda dhinaca tixraaca.
Ka dib markii la doorto polyvin ee matalaya magacaaga (TN, Rasante, iwm), amarka ayaa kuu sheegi doona inaad tilmaamto meesha tixraaca ee qaabka aad ujecel tahay, waa inaad tilmaantaa arrintan Horumarka guudTusaale ahaan haddii profile ah waa in 0 000 100 + + 000, waa tilmaamaya dhibic ee 0 ku horusocod ah ama 10 ama 20, iwm (si waafaqsan kasta sida masaafada galinta tilmaamay of cabbir).
Recuerda que si ay barnaamijku u helaan cabbiraadaha u dhigma, profile waa in si sax ah loo hago, ie cabbiruhu waxay sax yihiin profile.
Jaantuskan ayaa kaa caawin doona inaad si fiican u fahamtid doorashooyinka qaabkan:
Si aad u isticmaasho habdhaqankan waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda: (Qiimaha caadiga ah waa in la raaco tusaalaha leh faylka CAD ee ku lifaaqan)
Ku qor magaca amarka: ICP.
Ku qor miisaanka sawirka cabbirka cabbirka: 850 (waad isbedeli kartaa ilaa inta cabbirka uu ku haboon yahay)
Ku qor miisaanka qiyaasta ee profile: 1 (iskeelka toosan ee la mid ah sida hoose)
Gali masaafada u dhaxaysa horumarinta: 10
Ku qor lambarka jajab tobanlaha: 3
Xulo astaanta aad ku xaddidid (TN, Rasante, iwm.)
Waxay muujinaysaa calaamad ahaan qaabka aad ujecel tahay (eeg garaafka)
60. WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY IN AAD KA HELI KARTAA BARNAAMIJKA AMA DHISMAHA EE LAGU QAATO
Nidaamkani wuxuu ka soo baxay Otolisp iyo Visual Lisp, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho dhererka ama horukaca muraayad ama cirbadaha oo ku dheji jaantuska adigoo isticmaalaya dhibic galinta.
Si tan loo sameeyo waa in aad doorato polyline iyo waxay muujinayaan in horumar waa bilowga, waa in aad loo xaqiijiyo in amarka ka helay bar billow ah polyline saxda ah (bilaabi dhidibka) ah, laakiin, waxaad bedeli kartaa bilowga usheeda dhexe la ikhtiyaarka bandhigaysaa amarka this.
Waxaad bedeli kartaa qaar ka mid ah xuduudaha caadiga ah ee code-ka, sida dhererka qoraalka lagu geliyo.
Ogsoonow in nidaamka iskudhafkaagu yahay mid wanaagsan, haddii kale qalad ayaa la soo saarayaa marka la tilmaamayo dhibcaha horumarka ama dhererka la helo.
Ku qor magaca amarka: OPR
Dooro cirbadda cirifka ah ama qor galka «C«, Si aad u bedesho bilawga fiiqan
Ku qor qiimaha bilawga (ama bilowga) ee barta bilawga ah ee calaamadda caadiga ah: 0.00
Waxay tilmaamaysaa dhibcooyinka ku jira qadka aad rabto in aad hesho dhererka ama horumarka
61. LISP ROUTINE oo ka shaqeynaya hawlaha kala duwan ee la doortey TEXTED (NUMERICAL)
Waa joogtada yar laakiin sidoo kale waxtar leh a carrab la'aan kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho macluumaad ka hawlgallada la qoraalka la doortay, sida iska cad qoraalka waa in ay leeyihiin qiimaha tiro si ay u oofin karin xisaabaha, tusaale ahaan, "2.22", "3.39" (bilaa xigashooyin ah ), iwm.
Haddii ay ka mid yihiin qoraallada tirooyinka tirooyinka oo dhan hel buug aan tiro lahayn Tusaale ahaan, erayga "dhibic" wuxuu qaadan doonaa qoraalkan Qiimaha 0.00, sidaas natiijooyinka beddeli lahaa.
Macluumaadka ku xusan amarkan waa:
Xisaabi (Tirada guud ee xulashooyinka nambarka la doortay)
TiradaUgu badnaan (Qiimaha ugu sarreeya dhammaan qoraallada tirinta leh)
TiradaUgu yaraan (Qiimaha ugu hooseeya ee dhammaan qoraallada lambarada la doortay)
Celcelis ahaan (Celceliska dhammaan qoraallada tirooyinka la soo doortay)
Sum (Wadarta dhammaan qoraalada la soo xulay)
Si aad u hesho natiijooyinka kali ah waxay noqon doontaa mid ku filan in midkiina uu doorto mid ama daaqad (daaqada) qoraallada laga helo macluumaadka.
Ku qor magaca amarka: IV
Xulo dhammaan qoraalada tirooyinka aad rabto inaad hesho macluumaadka
62. ROUTINE LISP SHIRKADAHA WAX KA HELI KARAA DHIBAATOOYINKA DHAMMAAN
Jadwalkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhex mariso dhamaan qorshayaasha oo ay ku daabacaan mid kasta oo ka mid ah naqshadeynta bogga hadda aad leedahay, waxaa haboon in la caddeeyo in qaabka qaabka qaabka aan la tixgelin doonin.
Amarku wuxuu ku socdaa mid kasta oo ka mid ah mawduucyada iyo haddii ay xaqiijiso in ay tahay meesha moodeelka ah, waxaa lagu baddalay iyadoo la sii socota kuwa kale, sidaas darteed haddii aad rabto inaad sidoo kale daabacdo meel bannaan, kaliya bedel amarka taas oo sidoo kale la tixgeliyey oo la daabacay.
Waxaad ka faa'iideysan kartaa howlaha qaanuunkan ah, tusaale ahaan, geli xarfo waraaqo ah, tirtiro ama ku dar qoraalka meel kasta, iwm, amarku ma daabacaan shaqooyinka «Background«, Haddii aan lagu qorin sanduuqa wada hadalka fursadaha on the «Goobta iyo Daabacaadda«.
Haddii aad hayso faylal badan oo aad ku daabacan karto, mid walbana wuxuu leeyahay qaabab badan, waxaad kordhin kartaa shaqeynta amarkan adoo samaynaya waxyaabaha soo socda:
Abuuri feyl loo yaqaan Acad.lsp (haddii aadan horey u haysanin), faylkaasna ku dar dariiqyada soo socota ee meel kasta oo isku mid ah:
(garoobka s :: startup ()
(load "Isku soo wada duub oo daabac dhammaan layouts.LSP»); Tani waa magaca feyl ku lifaaqan.
Waddada lama sheegin sababtoo ah waxaa la fahamsan yahay in habka lsp qeexaya lagu daro liistooyinka taageerada ee AutoCAD (ku qoran sanduuqa xulashada), haddii kale, waxaad bedeli kartaa qadarka code (wadada buuxda ee liiska fsp ee load si loo muujiyo):
(culus «C: \_\_ CONSTRUCGEEK \_\_ TUSLISP \_" Ku sii gudub oo daabac dhammaan layouts.LSP »)
Si caadi ah loo isticmaalo (haddii aan wax laga beddelin) waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku qor magaca amarka: LPLOT
Waa inaad sugto ilaa dhammaan shaqooyinka daabacaada la dhammeeyo.
63. WAXYAABAHA KA QAADASHADA MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA XIDHIIDHA AMA LAHAYO LAMBARKA TALEEFOONKA
Jadwalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gashid qoraallo la soo xulay, oo ku dhejinaya dhinaca midigta, bidix ama labada dhinac, taas oo ku xirnaan doonta waxa amarka loo sheegay.
Tusaale ahaan haddii aad haysato qoraalka bilowga ah «0 + 580.00» oo waxaad u sheegi kartaa amarka in la gooyo xarfaha 2 ee bidixda, amarka ayaa bedeli doona "580.00".
Haddii aad amar ku bixiso amarrada xayiraadda 3 midigta, amarka wuxuu bedeli doonaa qoraalka hore «0 + 580».
Ugu dambeyntii, haddii aad u sheegto xulashada amarka si ay u dhinto on labada dhinac, characters 2 3 bidix iyo midig, qoraaladii asalka ahaa waxaa lagu beddeli doonaa "580".
Sida aad u arki karto, kaliya tilmaam tirada tirada jilayaasha si ay u gooyaan oo u doortaan qoraalka iyo kuwan waa la gooyaa sida lagu tilmaamay.
Ku qor magaca amarka: LAC
Muujisaa qaybta qoraalka ah ee la jarayo [Left / Right / Both]
Gali tirada jilayaasha si loo gooyo dhinaca loo yaqaan (s)
Xulo dhammaan qoraallada aad rabto inaad gooyso
Riix Furaha Furaha ama guji midig si aad u bedesho
Post Previous" Hore Bentley Geopak, aragti hore
Post Next Abuuri qaab sawireed oo TIN ah oo leh Bentley SiteNext »
53 jawaab ah "In kabadan 60 nidaamyada Autolisp ee AutoCAD"
MAALINTA MAALMAHA isagu wuxuu leeyahay:
SI AY UGU DARAAWEY DHAQANKA EM BAIXAR AS LISP. WAA IN LA SIIYAAN SITE OO AAD U HESHID XANUUNKA 'VHSSA' VISSA LISP EM ESPANHOL, MA HALINNO NIDAAMKA NABADA PAGINA MALAHAN FIM MA PAGINA SAMEEYA SETAS PARA PASSAR AYAA PAGE EE KU SAMEE IN AAN KU HELI KARO. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP, WAAXDA MACLUUMAADKA FILES EE TAXAAD AMA CODSIGE.
SI AY UGU DARAAWEY DHAQANKA EM BAIXAR AS LISP. WAA IN LA SIIYAAN SITE OO AAD U HESHID XANUUNKA 'VHSSA' VISSA LISP EM ESPANHOL, MA HALINNO NIDAAMKA NABADA PAGINA MALAHAN FIM MA PAGINA SAMEEYA SETAS PARA PASSAR AYAA PAGE EE KU SAMEE IN AAN KU HELI KARO. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP E WAA IN AY KU SAABSAN YAHAY FILES FARSAMO AMA CODSAN. I HOPE TER AJUDADO
Glen Sochackyj isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan jeclaan lahaa inaad ogaato haddii aad leedihiin wax koorso ama tababar ah oo aad wax kaga baratid barnaamijka Autocad. Iyo sidoo kale in la abuuro barnaamij iga caawiya tirinta iyo aqoonsashada goldaloolooyin badan
Waxay u shaqeysaa nooca 2017 ama ka yar. Maya loogu talagalay 2018 ama 2019
MARCOS isagu wuxuu leeyahay:
boa noite .. gostaria oo ogaanaya in ay lumiso 37. Shirkadaha xawaaraha 3DFace EM Solids ACIS waxeey ka shaqeysaa dhamaantiis aalado cad cad?
mahadsanid isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2019 at
mahadsan yothank yo
miisaaniyad isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma soo dejin kareemka
fadlan i soo diray
Xagee joogaa jadwalka?
peter perez isagu wuxuu leeyahay:
hello Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u heli karo bishimaha si aan u soo saaro isku-duubnaanta polyvin iyo midka si loo helo qashinka "polyvin"
DAVID GIRALDO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u shaqeeyaa sidii farshaxan P&ID waxaanan rabaa inaan ogaado sida aan u sameyn karo baloogyada caqliga leh ee aan ku leeyahay qorshaha autocad ee dhoofinta Excel.
Waxaan rabaa in aan soo saaro macluumaadkaas oo aan ku muujiyo Excel. haddii qof iga caawin karo fadlan
Micha isagu wuxuu leeyahay:
ich suche eine carrab la'aan, waa ermöglicht einer auf dhinta Polylinie beliebiger Stelle x-eine Stationierung ah (sidoo kale dhiman Lange der dieser Stelle ah Polylinie) anzuzeigen.
Xaqiiq. Waxaan kuu soo diri doonaa e-mayl ku saabsan shaqadan aad raadineyso ee ku dhex qarsoon.
jose walter quiroga isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan raadinayaa meel ficil ah oo aan ku sameeyo gradient, taas oo ah, oo leh goob wareeg ah oo wareeg ah, qalooca qalooca waa in la gooyaa oo khad ka sameysan asal ahaan iyo wixii la mid ah maxaa yeelay waxay ugu dhaqaaqdaa meel kale waa naqshadeynta waddo waana jaangooyooyin Nuqul ka samee wareegyada oo raad raac shabakadaha oo dhan mahadsanid
Maaha sidaas. Laakiin waxaan u direy email si loogu talagalay in uu kuu sheego haddii uu sameyn karo
Waxay leeyihiin jaangooyooyin si ay u xilsaaraan sifooyinka waxyaabaha aasaasiga ah, ee aan ahayn dhagaxyo, iyo kuwan waxaa lagu arki karaa sanduuqa wada hadalka ee shaashadda.
Sideen ugu soo dejisan karaa qodobbada "Dhoofinta dhoofinta ee faylka loo yaqaan 'CSV file' lisp)?
MARCO TULIO isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2018 at
RABTO AAD TAAGEERADA, INAAN QABO DHIBAATADA A bushimahayga AUTOCAD ma ku shuban Isku aadka TABLE MACLUUMAADKA FARSAMO (wadataa, dhinac, xaglo)
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, meeshaan ka helo macluumaad badan
EDGAR KEY isagu wuxuu leeyahay:
waa mid aad u wanaagsan liiska
MIguel isagu wuxuu leeyahay:
Juun, 2018 at
AD isagu wuxuu leeyahay:
OK isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2018 at
Federico isagu wuxuu leeyahay:
Hail, vorrei Nidaamka Routine AREASX, se è possibile.
Salaan Waxaan jeclaan lahaa in aan marin-u-helno jadwalka si aan u hagaajino si toos ah.
Waxaan jeclaan lahaa in ay u diraan joogtada ah carrab la'aan in uusan ka shaqeeyaan versions cusub iyo versions jir haddii ay soo shaqeeyay, waxaan rajeynayaa in ay sixi karaan iyo / ama waxa loo hagaajiyo, mail ii soo jeedinaynaa in aad ka jawaabto ama marka waxaan u soo diri joogtada ah ee carrab la'aan.
Dariel Fuentes isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2017 at
Aad u fiican oo dhan, waxaan u baahan tahay arcos_de_una_polilinea_en_segmentos_lineales.fas caadiga ah si ay u dhoofiyaan AutoCAD MIDAS Gen 2015 aan loo eegayn labada cirif ee ahbaa in autocad oo anna iyaga waan dumin galay qaybaha. Waad ku mahadsantihiin Waxaan ka socdaa Cuba
Jorge Pereira isagu wuxuu leeyahay:
Sou português e gostava, waa mid leh, laga soo bilaabo ter ilaa Rotina «XAQIIJIN KU SAABSAN SHAQADA MACLUUMAADKA EE KA SOO SAAR MADAXWAYNAHA CADAADADA».
Juun, 2017 at
waxaa jira wicitaan
; Joogta ah in isku-dhafanaanta la dhoofiyo qodobbada CSV. 1.0 version.
; Foomka feylka dhibcaha ee soo saaro: P, N, E, C (Point, North = Y, East = X, Dimension = Z)
Ka fiiri bogga Mario Torrez
joojiso isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan ma ii sheegi kartaa halka aan ka soo dejisan karo qaabsocodkaaga joogtada ah ee loo yaqaan 'Dhoofinta dhibcaha isuduwaha faylka CSV' maxaa yeelay waxaan haystaa sawirka halbeegga aag waxaanan u baahanahay inaan u dhoofiyo csv ama xallinta qodobbada oo la geliyey qoraal ahaan (nuxurka ayaa ah cabirka) iyo isku duwaha Z wuxuu soo baxaa eber, ma heshay?
Fadlan waad i caawin kartaa
RAY MARTÍNEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa xiisaha leh shaqada "Ka saar sheyga gudaha ama dibedda khadad la xushay", sababtoo ah maqaalka ma heli karo isku xirka soo degsiga.
GALMADA GALMADA GIRON YARLEQUE isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2016 at
WAXYAABAHA KA HELI KARO.
Dieco Huaman isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto jadwal si loo helo tirada shayada oo u dhigo qoraalka
Rey isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye, waxaan isku dayaa inaan hoos u dhigo jadwalka qaar ka mid ah digniinahani waxay soo baxayaan:
URL-ka / forum / Routine-lisp-to-add-to-divert-qiimaha-loo-xulay-qoraalka laguma helin serverkan.
Intaa waxaa dheer, qalad 404 la waayay kala kulantay markii uu isku dayay in la isticmaalo ErrorDocument ah in ay la tacaalaan codsiga.
Maxaan qaladeynayaa, 1000 mahadsanid King
juan paulo isagu wuxuu leeyahay:
Waa salaaman tahay haddii qof garanayo wax khad ah oo u saamaxaya inuu sawiro polygon garashada, dhererka iyo xaglaha, haddii qof ogyahay, topo12-ka caadiga ah haddii aad ii soo diri karto emaylkayga juanpaulo_100@htomail.comaad baad u mahadsan tihiin saaxiibo
CEOP isagu wuxuu leeyahay:
Xog wanaagsan grax…. : p
Luis Orlando Mamani isagu wuxuu leeyahay:
maalin wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado joogtada ah ee autocad 2014 haddii ay u leeyihiin inay soo saaraan jadwal udubdhexaad ah iyo naqshadaynta jidadka waaweyn
PASCUAL isagu wuxuu leeyahay:
aad u faa'iido leh ee horumarinta mashaariicda injineernimada
chinese isagu wuxuu leeyahay:
Iga raalli peuden caawiyo carrab la'aan ah si ay u soo koobto polyline ah ay km, waxaan ula jeedaa haddii aan polyline asal ahaan DM ee Incio 100 iyo dhamaadka dm 1000, si ay u xusaan dhibic kasta oo polyline, waxaana iga xoorin dm iyo tago xusan.
hadda dm ee bilowga iyo dhammaadka mar walba way ka duwanaan doonaan mashruuc kasta
haddii aadan i caawin karin, waan ku qanacsanahay, tan iyo intii aan la shaqeynayo hadana waxaan noqon lahaa mid waxtar leh mashaariicda wadooyinka.
geova isagu wuxuu leeyahay:
salaan qof iga caawin kara carrab la'aan ah si ay u xiri samaysaa baaritaan la arbitrias isuduwaha ka laba dhibcood, ka dibna ku wadataa woqooyi asalka ah waxaa la dhigayaa iyo bari iyo sare u qaadis iyaga ka tago arbitarias isku mid ah labo dhibcood laga bilaabo si aan ku sameeyey la Aling laakiin dhinacyada waxaa lagu beddelay
Lola isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2013 at
Salaan ayaad ka arki kartaa boggan:
waxaay sharxeysaa sida loo heli karo xogtaada oo aad wax uga qabatid, waxay keenaysaa nidaamyada lsp iyo hab pdf oo sharxaya sida loo isticmaalo.
juarez isagu wuxuu leeyahay:
maalin wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii uu jiro qof yaqaan jadwalka yaryar ama uu leeyahay tusaaleyaal fudud oo ka mid ah jadwalka yar ee lagu abuurayo xogta dbf oo ku dari xogta ama tirtirida autolisp.
Waxaan rajeynayaa inay i caawiyaan.
CECIL ALFONSO isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibada Saaxiibada Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii uu qofna ogyahay marxalad caadi ah si loo cabbiro xaglaha (waxaan rajeynayaa in dibadda ka ahaato qiyaasta iyo fogaanta iyo haddii aysan ahayn mid aad u badan oo weydii in ay dhoofaan Excel).
Ana Gaarcia isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayaad u qori kartaa habka .lsp ee ka shaqeeya marka sawir ah .dwg la soo buuxiyo iyo marka la diiwaangeliyo?
Waxaan ubaahanahay caawimaad si aan u arko haddii qof garanayo qaylo i badbaadin doono.
Waxaan rabaa inaan ka dhoofo 3d dhammaan qaybaha kala duwan ee loo sameeyay faylasha qoraalka ah, waxaan ubaahanahay inaan muujiyo masaafada, masaafada u dhexaysa miisaanka, iyo heerkaba u dhiganta.
Wax u eg sidaasi
Km, Dist ilaa cirif, Dimension
Kaliya taasi. Qof ayaa i caawin kara? Ma aqaan wax ku saabsan barnaamijka si aan u codsado caawimo.
Aan aragno inaan fahamsanahay.
Waxaad dhihi kartaa in aad lakabkaaga aad u dhoofin iskudhafyada Excel
Miyaad aad u fogeyneysaa? Anigu ma fahmi karo taas, waxaan u maleynayaa in uu ku jiro AutoCAD Sida cabirka ama shaqada ee luminta?
Laakiin haddii aad horey u leedahay iskudhufka Excel, maxaa sababay inaadan ku dhejin tiir kale oo leh qaab pythagoras u dhexeeya dhibicda iyo tan xigta?
xididka laba jibbaaran ee ((isku darka y2 - isku darka y2) laba jibbaaran + (x2 isuduwaha - x1 iskuduwaha) laba jibbaaran)
Zheyla isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan Hello, waxaan RABTO iga caawiyaan carrab la'aan A. SHARAX, waan Dhagri oo sanbal KASTA POINT ku hallaysaan carrab la'aan EXPORTA kooban wadataa ay u Excel ah, laakiin hadda u dhexeeya dhibic kasta oo dhibic, ADIGA IYO LOO DAMIYO DISTANCE THE, waqtigaan waxaan doonayaa inaan qaataan qiyaastii DHEXEEYA YPUNTO POINT luuqeeyo EE AAN LOO teeb in 400PUNTOS MASAAFADA IYO sinaba? FADLAN, sameeyo waxyaalo badan oo ME AND SO AVANZO SHAQO LEH ugu dhaqsiyaha badan.
Si aad u maamusho dhaqdhaqaaqyada Lisp, GeoCivil waxay bixisaa cashar caadi ah oo wanaagsan.
Daniela isagu wuxuu leeyahay:
hello, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jiraan nidaam joogto ah oo u beddelaya diyaaradda autocad qaab kale oo tixraac ah tusaale ahaan ka ah wgs84 illaa psad56
kaalay isagu wuxuu leeyahay:
Jadwalka Xidhiidhka ee sawiridda dhererka dheer, qiyaasta iskutallaabta, Iibsiga iyo dhoofinta qodobada kor ku xusan, kheyraadka kala duwan, maktabyada xannibaadda.
Gudaha qalabka gacanta, waxaa jira caawinaad loogu talagalay rakibidda.
Galka faylka muhiimka ah wuxuu helayaa faylka loogu talagalay waxqabadka.
Gudaha buug-gacmeedku waa faylasha caawinta ee amarrada.
Fiiro gaar ah: sababo isdabajoog ah, buug cusub oo la cusbooneysiiyay ayaa laga saaray oo dhowr sawirood ayaa lagu tirtiray buug gacmeed ku lifaaqan.
Buugga la cusbooneysiiyey waxaa lagu codsan karaa boostada
haddii codsiyadu ay faa'iido u leeyihiin iyaga, ama falanqeynayaan hawlgalkooda amarrada.
Janaayo, 2011 at
Isticmaal taliska pedito
waxaa jira ikhtiyaari ah in lagu dhejiyo nuqullo
sidee baan ku dhejin karayaa xayawaanka loo yaqaan "polyline".